နျူကလီးယပ် Accumbens အတွက် DeltaFosB လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာဆုကြေး၏သက်ရောက်မှုအားဖြည့်များအတွက်အရေးပါသည်။ (2010) - Porn တွင်သင့်ဦးနှောက်
မြစ်ဝကျွန်းပေါ် FosB နှင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူ
နျူကလီးယပ် Accumbens အတွက် DeltaFosB လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာဆုကြေး၏သက်ရောက်မှုအားဖြည့်များအတွက်အရေးပါသည်။ (2010)
မှတ်ချက်များ Delta FosB သည်အကျင့်နှင့်ဓာတုပစ္စည်းနှစ်ခုလုံး၏စွဲလမ်းမှုအတွက်အမှတ်အသားတစ်ခုဖြစ်သည်။ ဒီမော်လီကျူးကဆုလာဘ် circuit ကိုတိုးလာသည်နှင့်အမျှစွဲလမ်းစေသည့်အပြုအမူများကိုပြုလုပ်ပါ။ ၎င်းသည်အာရုံကြောဆိုင်ရာပြောင်းလဲမှုတွင်ပါဝင်သောမော်လီကျူးများထဲမှတစ်ခုဖြစ်သည်။ ဒီစမ်းသပ်မှုကလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအတွေ့အကြုံနဲ့မူးယစ်ဆေးစွဲတာနဲ့အတူတူပိုများလာတယ်ဆိုတာပြတယ်။ စမ်းသပ်မှုတွင်သူတို့သည်ပုံမှန်ထက်ကျော်လွန်သောအဆင့်များကိုတိုးမြှင့်နိုင်ရန်မျိုးရိုးဗီဇဆိုင်ရာအင်ဂျင်နီယာကိုအသုံးပြုခဲ့သည်။ ဤသည်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာလှုပ်ရှားမှုတိုးမြှင့်လွယ်ကူချောမွေ့စေခဲ့သည်။ ဒါကညစ်ညမ်းတဲ့စွဲလမ်းမှုနဲ့ဖြစ်မယ်လို့ထင်တယ်။
အိုး KK, Frohmader KS, Vialou V ကို, Mouzon အီး, Nestler EJ, Lehman MN, Coolen LM ။
မျိုးဗီဇဦးနှောက်ပြုမူနေ။ 2010 အောက်တိုဘာ;9(7): 831-40 Doi: 10.1111 / j.1601-183X.2010.00621.x ။ EPub 2010 သြဂုတ် 16 ။
ခန္ဓာဗေဒနဲ့ဆဲလ်ဇီဝဗေဒ, ဆေးပညာနှင့်သွားဘက်ဆိုင်ရာ၏ Schulich ကျောင်း, အနောကျပိုငျးအွန်, လန်ဒန်တက္ကသိုလ်, အွန်, ကနေဒါဦးစီးဌာန။
အထီးကြွက်များတွင်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူကြိုးများနှင့်အားဖြည့်သည်။ သို့သျောလညျးအနညျးငယျလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာဆုလာဘ်သို့မဟုတ်လိင်မှုဆိုင်ရာအပြုအမူများ၏နောက်ဆက်တွဲစကားရပ်အပေါ်ဆုလာဘ်တွေရဲ့အားဖြည့်အကျိုးသက်ရောက်မှုများဖြန်ဖြေတိကျတဲ့ဆယ်လူလာနှင့်မော်လီကျူးယန္တရားများနှင့် ပတ်သက်. လူသိများသည်။ ဒီလေ့လာမှုကΔFosB, အ stably FosB ၏ခြင်းကိုပုံစံထုတ်ဖော်ပြောဆိုသောအယူအဆစမ်းသပ်, လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူများနှင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာလှုံ့ဆော်မှုများနှင့်စွမ်းဆောင်ရည်များအတွေ့အကြုံကို-သွေးဆောင်ပံ့ပိုးများ၏အားဖြည့်အတွက်အရေးပါသောအခန်းကဏ္ဍမှပါဝင်သည်။
လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအတွေ့အကြုံနျူကလိယ accumbens (NAc) အပါအဝင်အများအပြား limbic ဦးနှောက်ဒေသများတွင်ΔFosBစုဆောင်းခြင်းစေပြ, medial prefrontal cortex, ventral tegmental ဧရိယာနှင့် putamen ပေမယ့်မ medial preoptic နျူကလိယ caudate ခဲ့သည်။
ထို့နောက်က c-Fos, ΔFosBတစ်မြစ်အောက်ပိုင်း (ဖိနှိပ်) ပစ်မှတ်၏ induction လိင်အတွေ့အကြုံနှင့်ရင်တော့မှားမယ်တိရိစ္ဆာန်များအတွက်တိုင်းတာခဲ့သည်။ မိတ်လိုက်-သွေးဆောင်က c-Fos-immunoreactive ဆဲလ်အရေအတွက်သိသိသာသာလိင်ရင်တော့မှားမယ်ထိန်းချုပ်မှုတွေနဲ့နှိုင်းယှဉ်ရင်လိင်ကြုံတွေ့တိရိစ္ဆာန်များအတွက်ယုတ်လျော့ခဲ့သည်။
နောက်ဆုံးတွင် NAc အတွက်ΔFosBအဆင့်ဆင့်နှင့်၎င်း၏လှုပ်ရှားမှုလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအတွေ့အကြုံနှင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာစွမ်းဆောင်ရည်ကို၏အတွေ့အကြုံကို-သွေးဆောင်ပံ့ပိုးကူညီဖြန်ဖြေအတွက်၎င်း၏အလားအလာအခန်းကဏ္ဍလေ့လာဖို့ဗိုင်းရပ်စ်-mediated ဗီဇလွှဲပြောင်းသုံးပြီးခြယ်လှယ်ခဲ့ကြသည်။ ΔFosB overexpression နှင့်အတူတိရစ္ဆာန်များထိန်းချုပ်မှုမှဆွေမျိုးလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအတွေ့အကြုံနှင့်အတူလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာစွမ်းဆောင်ရည်ကိုတိုးမြှင်ပံ့ပိုးကူညီပြသ။ ဆနျ့ကငျြ, ΔJunD, ΔFosBတစ်ဦးကြီးစိုးကအနုတ်စည်းနှောင်မိတ်ဖက်၏ဟူသောအသုံးအနှုနျးလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာစွမ်းဆောင်ရည်ကို၏လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအတှေ့အကွုံ-သွေးဆောင်ပံ့ပိုး attenuated နှင့်အုပ်စုများ overexpressing အစိမ်းရောင်ချောင်းပရိုတိန်းနှင့်ΔFosBနှင့်နှိုင်းယှဉ်ပါပံ့ပိုးကူညီခြင်း၏ရေရှည်ထိန်းသိမ်းမှုလှီ။
အတူတကွဤတွေ့ရှိချက်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူများနှင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာစွမ်းဆောင်ရည်ကို၏လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအတှေ့အကွုံ-သွေးဆောင်ပံ့ပိုးများ၏အားဖြည့်သက်ရောက်မှုများအတွက် NAc အတွက်ΔFosBစကားရပ်များအတွက်အရေးပါသောအခန်းကဏ္ဍထောက်ခံပါတယ်။
လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူအလွန်အမင်းကြိုးများနှင့်အထီးကြွက်များအတွက်အားဖြည့်ဖြစ်ပါသည် (Coolen et al ။ 2004; Pfaus et al။ 2001) ။ ထို့အပြင်, လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအတှေ့အကွုံ (နောက်ဆက်တွဲလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူနှင့်ဆုလာဘ်ပွောငျးလဲTenk et al။ 2009) ။ ထပ်ခါတလဲလဲမိတ်လိုက်အတွေ့အကြုံနှင့်အတူ (လိင်အပြုအမူ facilitated ဖြစ်ပါတယ်သို့မဟုတ် "အားဖြည့်", လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာစွမ်းဆောင်ရည်ကို၏မိတ်လိုက်နှင့်ပံ့ပိုးကူညီစတင်ရန်လျော့နည်းသွား latency ခြင်းဖြင့်သက်သေBalfour et al။ 2004; Pfaus et al။ 2001) ။ သို့သျောလညျး, လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာဆုလာဘ်များနှင့်အားဖြည့်များ၏နောက်ခံဆယ်လူလာနှင့်မော်လီကျူးယန္တရားများညံ့ဖျင်းနားလည်သဘောပေါက်ထားပါသည်။ လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူများနှင့်မိတ်လိုက်ကြိုတင်ခန့်မှန်းကြောင်း Conditions တွေကိုယာယီအထီးကြွက်များ၏ mesolimbic စနစ်ချက်ချင်း-အစောပိုင်းဗီဇက c-fos (၏စကားရပ်သွေးဆောင်ပြခဲ့ကြBalfour et al။ 2004; Pfaus et al။ 2001) ။ ထို့အပွငျကမကြာသေးမီက (လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအတွေ့အကြုံကယောက်ျားကိုကြွက် mesolimbic စနစ်ကြာရှည် neuroplasticity induces ကြောင်းသရုပ်ပြခဲ့သည်Frohmader et al။ 2009; အိုး et al။ 2010). ထို့အပြင်ခုနှစ်, အထီးကြွက်များတွင်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအတှေ့အကွုံΔFosBသွေးဆောင်ပြခဲ့ပြီး,aနျူကလီးယပ် accumbens (NAc) တွင် Fos မိသားစုဝင်, (Wallace et al။ 2008) ။ ΔFosB, FosB တစ်ခြင်းကို splice မူကွဲ, (၎င်း၏ သာ. ကြီးမြတ်တည်ငြိမ်မှုကြောင့် Fos မိသားစုတစ်မူထူးခြားတဲ့အဖွဲ့ဝင်တစ်ဦးဖြစ်ပါသည်Carl et al။ 2007; Ulery-Reynolds က et al။ 2008; Ulery et al။ 2006) နှင့်အလွဲသုံးစားမှုနှင့်ရေရှည်အာရုံကြော plasticity ဖြန်ဖြေစွဲ၏မူးယစ်ဆေးများအတွက်မြှင့်တင်ရန်လှုံ့ဆျောမှုနှင့်ဆုလာဘ်တစ်ခုအခန်းကဏ္ဍ (Nestler et al။ 2001) ။ ΔFosBဇွန်ပရိုတိန်းနဲ့ heteromeric ကူးယူအချက်ရှုပ်ထွေးသော (active ပရိုတိန်း-1 (AP-1)), ဖြစ်နိုင်ရင် JunD (ဖြစ်ပေါ်လာသောChen က et al။ 1995; Hiroi et al။ 1998). အဓိကအား bi-Transgene ကြွက်ကိုအသုံးပြုပြီး striatum ဖို့ကန့်သတ်, Over-စကားရပ်ΔFosB၏သွေးဆောင်မှတဆင့်တစ်ဦးမူးယစ်ဆေးဝါးစွဲတူသောအမူအကျင့် phenotype ယခင်မူးယစ်ဆေးထိတွေ့မှုတစ်ခုမရှိခြင်းရှိနေသော်လည်းထုတ်လုပ် (McClung et al။ 2004) ။ ဒီအမူအကျင့် phenotype (ကိုကင်းဖို့ထိခိုက် locomotor တုံ့ပြန်မှုများပါဝင်သည်Kelz et al။ 1999ကိုကင်းဘို့), တိုးမြှင့ preference ကို (Kelz et al။ 1999) နှင့်မော်ဖင်းအကိုက် (Zachary et al။ 2006), နှင့်တိုးမြှင့်ကင်း Self-အုပ်ချုပ်ရေး (Colby et al။ 2003).
မူးယစ်ဆေးဆုလာဘ်ဆင်တူ, ΔFosBသဘာဝအကြိုးအပြုအမူတွေအားဖြင့် upregulated နှင့်ဤအပြုအမူ၏ဟူသောအသုံးအနှုနျး mediates ဖြစ်ပါတယ်။ အဆိုပါ NAc အတွက်ΔFosB၏စကားရပ်-over ကြွက်မော်ဒယ်များကို အသုံးပြု. ဆန္ဒအလျောက်ဘီးပြေးတိုးပွါး (Werme et al။ 2002), စားစရာဘို့တုံ့ပြန်ဆာပ (Olausson et al။ 2006), sucrose စားသုံးမှု (Wallace et al။ 2008), နှင့်အထီးနိုင်အောင်စီစဉ်ပေးထားတယ် (Wallace et al။ 2008) နှင့်မိန်းမနှစ်ယောက်တည်းကို (Bradley et al။ 2005) လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူ။ ထို့ကြောင့်ΔFosBသဘာဝအကြိုးအတွေ့အကြုံများ၏အကျိုးသက်ရောက်မှုများဖြန်ဖြေတွင်ပါဝင်ပတ်သက်စေခြင်းငှါ။ T ကသူကလက်ရှိလေ့လာမှုအထူး mesolimbic စနစ်နောက်ဆက်တွဲမိတ်လိုက်အပြုအမူနှင့်အာရုံကြော activation အပေါ်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအတွေ့အကြုံ၏ရေရှည်ရလဒ်များအတွက် NAc အတွက်ΔFosB၏အခန်းကဏ္ဍကိုစုံစမ်းစစ်ဆေးနေဖြင့်ယခင်လေ့လာမှုများအပေါ်ချဲ့ထွင်.
ပထမဦးစွာကဆုလာဘ် circuitry ်ပတ်သက်နေဒေသများနှင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူလိင်အတွေ့အကြုံကို-သွေးဆောင်ΔFosBဖော်ပြထားတဲ့ဦးနှောက်ကိုတည်ထောင်ခဲ့ပါသည်။
က c-Fos, ΔFosBအားဖြင့်ဖိနှိပ်နေတဲ့မြစ်အောက်ပိုင်းပစ်မှတ် (၏မိတ်လိုက်-သွေးဆောင်စကားရပ်အပေါ်လိင်အတွေ့အကြုံကို-သွေးဆောင်ΔFosB၏ယင်းနောက်အကျိုးသက်ရောက်မှုRenthal et al။ 2008), စုံစမ်းစစ်ဆေးခဲ့သည်။
နောက်ဆုံးအနေနဲ့လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာလှုံ့ဆော်မှုများနှင့်စွမ်းဆောင်ရည်များလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူများနှင့်အတွေ့အကြုံ-သွေးဆောင်ပံ့ပိုးအပေါ် NAc အတွက်ΔFosBလှုပ်ရှားမှုကြိုးကိုင်၏အကျိုးသက်ရောက်မှု (Over-စကားရပ်နှင့်တစ်ဦးကြီးစိုးကအနုတ်-binding partner ၏စကားရပ်မျိုးဗီဇ) ဗိုင်းရပ်စ်အားနည်းချက်ကိုပေးပို့နည်းပညာကို အသုံးပြု. ဆုံးဖြတ်ထားခဲ့ပါတယ်။
အရွယ်ရောက်ပြီးသူအထီး Sprague Dawley ကြွက် (200-225 ဂရမ်) ချားလ်စ်မြစ်ဓာတ်ခွဲခန်း (Senneville, QC, ကနေဒါ) မှရရှိသောခဲ့ကြသည်။ တိရစ္ဆာန်များစမ်းသပ်ချက်တစ်လျှောက်လုံးအတူတူလိင်အားလုံးအတွက်ဥမင်လိုဏ်ခေါင်းပြွန်နှင့်အတူ Plexiglas လှောင်အိမ်၌ကျိန်းဝပ်ခဲ့ကြသည်။ ကိုလိုနီအခန်းထဲမှာအစားအစာနှင့်မရရှိနိုင်ပါသည်ရေနှင့်အပူချိန်-စညျးမဉျြးစညျးကမျးကြီးနှင့် 12 / 12 နာရီအလင်းမှောင်မိုက်သံသရာအပေါ်ထိန်းသိမ်းထား ကြော်ငြာ libitum အမူအကျင့်ကိုစမ်းသပ်နေစဉ်အတွင်း မှလွဲ. ။ မိတ်လိုက်အစည်းအဝေးများဘို့နှိုးဆွအမျိုးသမီး (210-220 ဂရမ်) နက်ရှိုင်းသောမေ့ဆေးအောက်မှာနှစ်နိုင်ငံ ovariectomy (5g ketamine / 95g Xylazine) အောက်ပါ 0.35% estradiol benzoate နဲ့ 0.052% လက်စထရောင်တစ်ဦးအရေပြားအောက်ဆုံး implants ကိုလက်ခံရရှိခဲ့သည်။ လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ Reception ခန့်မှန်းခြေအားဖြင့် 500 နာရီစမ်းသပ်ခြင်းမပြုမီ 0.1 mL နှမ်းဆီ4μgအဓိကချို့ယွင်း၏အုပ်ချုပ်ရေးအားဖြင့်သွေးဆောင်ခဲ့သည်။ အားလုံးလုပျထုံးလုပျနညျးအနောက်တိုင်းအွန်တက္ကသိုလ်၏တိရိစ္ဆာန်စောင့်ရှောက်မှုနှင့်အသုံးပြုမှုကော်မတီများကအတည်ပြုခြင်းနှင့်သုတေသနအတွက်ကျောရိုးရှိသတ္တဝါတိရိစ္ဆာန်များပါဝင်သော CCAC လမ်းညွှန်ချက်တညီတည်းခဲ့ကြသည်။
မိတ်လိုက်အစည်းအဝေးများမှိန်အနီရောင် illumination အောက်မှာ (အမှောင်ထဲမှာကာလ၏စတင်ခြင်းပြီးနောက် 2-6 နာရီကြား) အစောပိုင်းမှောင်မိုက်အဆင့်စဉ်အတွင်းဖြစ်ပွားခဲ့သည်။ စတင်ခြင်းစမ်းသပ်မတိုင်မီက, အိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်ကျပန်းအုပ်စုများသို့ခွဲခြားခဲ့ကြသည်။ မိတ်လိုက်အစည်းအဝေးများကာလအတွင်းအထီးကြွက်သုတ်ရည်လွှတ်သို့မဟုတ် 1 နာရီမှ copulate ခွင့်ပြုခဲ့သည်များနှင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူများအတွက် parameters တွေကိုအပါအဝင်မှတ်တမ်းတင်ခဲ့ပါသည်: အောင်းနေချိန် (ML; အမျိုးသမီး၏နိဒါန်းအနေဖြင့်ပထမဦးဆုံးတောင်ပေါ်မှာသည်အထိအချိန်) mount intromission အောင်းနေချိန် (IL, အချိန်နိဒါန်းကနေ အဆိုပါပထမဦးဆုံးအမျိုးသမီးအင်္ဂါဇာတ်ထိုးဖောက်မှုနှင့်အတူ mount သည်အထိအမျိုးသမီး), သုတ်ရည်လွှတ်အောင်းနေချိန် (EL; သုတ်ရည်လွှတ်မှပထမဦးဆုံး intromission ကနေအချိန်), post ကိုသုတ်ရည်လွှတ်ကြားကာလ (pei; သုတ်ရည်လွှတ်ခြင်းမှပထမဦးဆုံးနောက်ဆက်တွဲ intromission ဖို့အချိန်), တောင်ပေါ်အရေအတွက် (M; တင်ပါးဆုံတွင်းထိုးအင်္ဂါဇာတ်ခြင်းမရှိဘဲ ထိုးဖောက်မှု), intromissions အရေအတွက် (IM; အင်္ဂါဇာတ်ထိုးဖောက်မှုအပါအဝင် mount) နှင့်သုတ်ရည်ထိထိရောက်မှု (အဒေီ = ထားတဲ့ IM / (M က IM +)) (Agmo 1997) ။ တောင်ပေါ်နှင့် intromissions ၏နံပါတ်များကိုသုတ်ရည်လွှတ်မပြခဲ့ဘူးကြောင်းတိရစ္ဆာန်များအဘို့ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာခြင်းတွင်မပါဝင်ခဲ့ကြသည်။ သုတ်ရည်လွှတ်အောင်းနေချိန်, ဘယ်အရာမှမပါဘဲနှင့်သုတ်ရည်ထိထိရောက်မှုအရေအတွက် (လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာစွမ်းဆောင်ရည်ကိုရောင်ပြန်ဟပ်စဉ်တောင်ပေါ်ကနှင့် intromission latency, လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာလှုံ့ဆော်မှုများပြ parameters များကိုများမှာHull 2002).
စမ်းသပ်မှု 1: ΔFosB၏ Expression
လိင်ရင်တော့မှားမယ်အထီးကြွက်စင်ကြယ်သောစမ်းသပ်မှုလှောင်အိမ်ထဲမှာမိတ်ရန်ခွင့်ပြုခဲ့သည် (60 × 45 × 50 စင်တီမီတာ) အတွက်5ဆက်တိုက်နေ့စဉ်မိတ်လိုက်အစည်းအဝေးများသို့မဟုတ်လိင်ရင်တော့မှားမယ်နျြရစျ။ နောက်ဆက်တွဲဇယား 1 ရင်တော့မှားမယ်မျှလိင် (NNS; ဎ = 5), ရင်တော့မှားမယ်လိင် (NS; ဎ = 5), အဘယ်သူမျှမလိင်တွေ့ကြုံ (ENS; ဎ = 5) နှင့်အတွေ့အကြုံရှိလိင် (; ဎ =4ES): အဆိုပါအမူအကျင့်စမ်းသပ်အုပ်စုများအတွက်ပါရာဒိုင်းဖော်ပြထားပါတယ်။ NS နဲ့ ES တိရိစ္ဆာန်များမိတ်လိုက်-သွေးဆောင်က c-Fos စကားရပ်စုံစမ်းစစ်ဆေးရန်မိတ်လိုက်၏နောက်ဆုံးနေ့ရက်တွင်သုတ်ရည်လွှတ်အောက်ပါ 1 နာရီယဇ်ပူဇော်ကြ၏ခဲ့ကြသည်။ NNS တိရိစ္ဆာန်များလိင်အတွေ့အကြုံကို-သွေးဆောင်ΔFosBဆနျးစစျဖို့ 24 နာရီနောက်ဆုံးမိတ်လိုက် session တစ်ခုပြီးနောက် ENS တိရိစ္ဆာန်များနှင့်အတူတစ်ပြိုင်နက်တည်းယဇျပူဇျောခဲ့သညျ။ လိင်ကြုံတွေ့အုပ်စုများနောက်ဆက်တွဲစမ်းသပ်ခြင်းမပြုမီလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူများအတွက်ကိုက်ညီခဲ့သည်။ အဘယ်သူမျှမသိသိသာသာကွဲပြားခြားနားမှုလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူ၏သင့်လျော်သောမိတ်လိုက် session တစ်ခုနှင့်လိင်အတွေ့အကြုံကို-သွေးဆောင်ပံ့ပိုးနှစ်ဦးစလုံးအတွေ့အကြုံရှိအုပ်စုများ (အားဖြင့်ပြသခဲ့ပါသည်အတွင်းမည်သည့်အမူအကျင့်အစီအမံများအတွက်အုပ်စုများအကြားတွေ့ရှိခဲ့ကြသည်နောက်ဆက်တွဲဇယား 2) ။ ထိန်းချုပ်မှုလိင်တိုက်ရိုက်အမျိုးသမီးအဆက်အသွယ်မပါဘဲအမျိုးသမီးအနံ့နှင့်အသံထိတွေ့ခြင်းမရှိစေရန်မိတ်လိုက်တိရိစ္ဆာန်များနှင့်အတူတစ်ပြိုင်နက်တည်းကိုင်တွယ်ရင်တော့မှားမယ်အထီးပါဝင်သည်။
ယဇျပူဇျောဘို့, အိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်နက်နက်ရှိုင်းရှိုင်းဆိုဒီယမ် pentobarbital (270mg / ကီလိုဂရမ်; ip) ကို အသုံးပြု. anesthetized ခဲ့ကြသည်နှင့်အ 50 M ကဖော့စဖိတ်ကြားခံ (PB) တွင် 0.9% paraformaldehyde ၏ 500 mL အားဖြင့်နောက်တော်သို့လိုက် 4% ဆား၏ 0.1 mL နှင့်အတူ intracardially perfused ။ ဦးနှောက်ထို့နောက် 1 M က PB အတွက် 20% sucrose နှင့် 0.01% ဆိုဒီယမ် azide ကိုစွဲလန်းနှစ်သက်ခြင်းနှင့် 0.1 ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်မှာသိမ်းဆည်းထား, တူညီတဲ့ fixative အတွက်ဖယ်ရှားခြင်းနှင့်အခန်းအပူချိန်မှာ4ဇများအတွက် Post-fixed ခဲ့ကြသည်။ မှု Coronal အပိုင်း (35 μm), တစ်ဦးအေးခဲနေသော microtome (H400R, Micron, ဂျာမနီ) နဲ့ဖြတ် cryoprotectant ဖြေရှင်းချက်လေးအပြိုင်စီးရီး (30% sucrose နှင့် 30 M က PB အတွက် 0.1% Ethylene glycol) တွင်စုဆောင်း -20 ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်မှာသိမ်းဆည်းထားခဲ့ကြသည်။ Incubator အကြား; အခမဲ့ floating ကဏ္ဍများ 0.1 M ကဖော့စဖိတ်-buffered ဆား (pH ကို 7.3-7.4 PBS) နဲ့ကျယ်ပြန့်ကိုဆေးကြောခဲ့ကြသည်။ ကဏ္ဍများ% H ကို 1 ထိတွေ့ခဲ့သည်2O2 endogenous peroxidases ဖျက်ဆီးဖို့အခန်းအပူချိန်မှာ 10 မိဘို့, ထို့နောက် 0.1% bovine သွေးရည်ကြည် albumin (catalog ကို item 005-000-121; Jackson က ImmunoResearch Laboratories, အနောက် Grove, PA) ပါဝင်တဲ့ PBS ဖြစ်သည့် PBS + ပေါက်ဖွားဖြေရှင်းချက်ထဲမှာပိတ်ဆို့နှင့် 0.4% ထရီ X ကို 100 ဇသည် ဖြစ်. , -151 (Sigma-Aldrich catalog ကို item BP500-1) ။ (:; SC-4 Santa Cruz ဇီဝနည်းပညာ, Santa Cruz,, CA, USA သို့ 1K 5) ကဏ္ဍများထို့နောက်ဒယ်အိုး-FosB ယုန် polyclonal antibody ကိုအတွက် 48 ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်မှာနေ့ချင်းညချင်းနွေးထွေးစွာရှိနေပြီးခဲ့ကြသည်။ ဒယ်အိုး-FosB antibody ကို FosB နှင့်ΔFosBအားဖြင့်မျှဝေထားတဲ့အတွင်းပိုင်းဒေသဆန့်ကျင်ထမြောက်တော်မူခဲ့သည်။ Post-လှုံ့ဆော်မှုအချိန် (24 နာရီ) မှာအားလုံးရှာဖွေ ထောက်လှမ်း. လှုံ့ဆော်မှု-သွေးဆောင် FosB (ယုတျညံ့သောကွောငျ့ထိုΔFosB-မှာ IR ဆဲလ်တွေအထူးသΔFosB-အပြုသဘောခဲ့ကြသည်Perrotti et al။ 2004; Perrotti et al။ 2008) ။ ထို့အပြင်, ဒီစမ်းသပ်မှုထဲမှာနောက်ဆုံးသောနေ့ရက် (NS, ES) ရက်နေ့တွင်အဖော်ရှာတိရိစ္ဆာန်များကြိုတင် FosB စကားရပ်ဤသို့, အဖော်ရှာပြီးနောက် 1 ဇယဇျပူဇျောခဲ့သညျ။ အနောက်တိုင်းချေခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာခန့်မှန်းခြေအားဖြင့် 37 KD မှာΔFosB၏ထောက်လှမ်းအတည်ပြုပြောကြားခဲ့သည်။ ထို့နောက်နှင့် avidin-ဓါတ်-hoseradish peroxidase (Credit: ABC အထက်တန်းလွှာထဲမှာ 1 ဇ; မူလတန်း antibody ကိုပေါက်ဖွားပြီးနောက်, အပိုင်းဓါတ်-conjugation ဆိတ်သငယ်ကိုဆန့်ကျင်ယုန် IgG (Vector Laboratories, Burlingame,, CA, USA သို့ PBS + အတွက် 1 500) တွင် 1 ဇများအတွက်နွေးထွေးစွာရှိနေပြီးခဲ့ကြသည် ; 1: PBS အတွက် 1K; Vector Laboratories, Burlingame,, CA, USA) ။ အောက်ပါဒီပေါက်ဖွားကဏ္ဍများကိုအောက်ပါနည်းလမ်းတွေထဲကတစ်ခုအတွက်လုပ်ငန်းများ၌ခဲ့ကြသည်:
1 ။ လူပျို peroxidase တံဆိပ်ကပ်ခြင်း
NNS နှင့် ENS တိရစ္ဆာန်များ၏ကဏ္ဍများလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအတှေ့အကွုံ-သွေးဆောင်ΔFosBစုဆောင်းခြင်းတစ်ဦးနှောက်ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာများအတွက်အသုံးပြုခဲ့ကြသည်။ အတူ 10 M က PB အတွက် 0.02% နီကယ် sulfate နှင့်အတူတိုးမြှင်; Credit: ABC ပေါက်ဖွားအောက်ပါတို့သည် peroxidase ရှုပ်ထွေး 3,3% 0.02'-diaminobenzidine tetrahydrochloride (Sigma-Aldrich, စိန့်လူးဝစ်, MO ကို DAB) င်တစ်ဦး chromogen ဖြေရှင်းချက်မှ 0.1 မိနစ်ကုသမှုအောက်ပါမြင်ခဲ့သည် ဟိုက်ဒရိုဂျင်ပါအောက်ဆိုဒ် (0.015%) ။ ကဏ္ဍများတုံ့ပြန်မှုအဆုံးသတ်ခြင်းမှ 0.1 M က PB အတွက်နှိုက်နှိုက်ချွတ်ချွတ်ဆေးကြောခြင်းနှင့် ddH အတွက် 0.3% gelatin နှင့်အတူ coded Superfrost ပေါင်းဖန်ဆလိုက် (Fisher သည်, Pittsburg, PA, USA) ပေါ်သို့တပ်ဆင်ထားခဲ့သည်20 ။ ရေဓါတ်ခန်းခြောက်အောက်ပါအပေါင်းတို့, ဆလိုက် DPX (dibutyl Phthalate xylene) နဲ့ဖုံး-ချော်ခဲ့သည်။
2 ။ dual နဲ့ Immunofluorescence
NAc နှင့် mPFC င်အားလုံးလေးယောက်စမ်းသပ်အုပ်စုများထံမှကဏ္ဍများΔFosBနှင့်က c-Fos ၏ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာများအတွက်အသုံးပြုခဲ့ကြသည်။ PBS အတွက် 10 + 1% H ကို: 250; Credit: ABC ပေါက်ဖွားပြီးနောက်ကဏ္ဍများ biotinylated tyramide (BT နှင့်အတူ 0.003 မိဘို့နွေးထွေးစွာရှိနေပြီးခဲ့ကြသည်2O2 Tyramid Signal Amplification Kit, NEN ဘဝကသိပ္ပံဘော်စတွန်, MA) နှင့် Alexa 30-conjugation strepavidin (488 နှင့်အတူ 1 မိဘို့: 100; Jackson က Immunoresearch Laboratories, အနောက် Grove, PA) ။ ကဏ္ဍများပြီးတော့အထူးသက c-Fos အသိအမှတ်ပြုနေတဲ့ယုန် polyclonal antibody ကိုနှင့်အတူနေ့ချင်းညချင်းနွေးထွေးစွာရှိနေပြီးခဲ့ကြသည် (1: 150; SC-52; Santa Cruz ဇီဝနည်းပညာ, Santa Cruz,, CA), ဆိတ်ကိုဆန့်ကျင်ယုန် Cy30-conjugation အလယ်တန်း antibody ကိုအတူ3မိပေါက်ဖွားခြင်းဖြင့်နောက်တော်သို့လိုက် (1: 200; Jackson က Immunoresearch Laboratories, အနောက် Grove, PA, USA) ။ အစွန်းအထင်းကိုအောက်ပါခြင်း, အပိုင်း ddH အတွက် 0.1% gelatin နှင့်အတူ coded ဖန်ဆလိုက်ပေါ်သို့တပ်ဆင်ထား, 0.3 M က PB အတွက်နှိုက်နှိုက်ချွတ်ချွတ်ဆေးကြောခဲ့သည်20 နှင့်ဆန့်ကျင်နွမ်းအေးဂျင့် 1,4-diazabicyclo (2,2) ကထုတ်တဲ့ (; 50 / ml, Sigma-Aldrich, စိန့်လူးဝစ်, MO ကို mg DABCO) ပါဝင်တဲ့အလတ်စား (Gelvatol) mounting တစ်ခု aqueous နှင့်အတူ-ချော်များဖုံးလွှမ်း။ Immunohistochemical ထိန်းချုပ်မှုသင့်လျော်သောလှိုင်းအလျားအတွက်တံဆိပ်ကပ်ခြင်း၏မရှိခြင်းအတွက်ရရှိလာတဲ့, ဒါမှမဟုတ်နှစ်ဦးစလုံးမူလတန်းပဋိ၏ပျက်ကွက်ပါဝင်သည်။
နှစ်ဦးအားစမ်းသပ်ဦးနှောက်ကျယ်ပြန့် coded ဆလိုက်ပေါ်စကင်ဖတ်စစ်ဆေးဖျော်ဖြေကုသမှုမျက်စိကန်း။ ΔFosB-immunoreactive (-IR) ကဦးနှောက်ကိုတလျှောက်လုံးဆဲလ် Semi-quantitative ကွပ်ထားတယ်အဖြစ်ΔFosB-အပြုသဘောဆဲလ်များ၏အရေအတွက်ကိုကိုယ်စားပြုရန်စကေးသုံးပြီးဆန်းစစ်ခဲ့ကြသည် စားပွဲတင် 1။ ထို့အပြင်ခုနှစ်, Semi-အရေအတွက်တွေ့ရှိချက်အပေါ်အခြေခံပြီး, ΔFosB-မှာ IR ဆဲလ်များ၏နံပါတ်များကိုတစ်ဦး Leica DMRD ဏု (Leica Microsystems ကို GmbH, Wetzlar မှပူးတွဲပါတဲ့ကင်မရာ lucida ဆွဲပြွန်ကို အသုံးပြု. ဆုလာဘ်များနှင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူအတွက်ပတ်သက်သည်ဟုယူဆရဦးနှောက်ဧရိယာများတွင်ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာခြင်းစံဒေသများသုံးပြီးရေတွက်ခဲ့သည် , ဂျာမနီ): NAc (core ကို (C) နှင့် shell ကို (S); 400 ×600μm) (သုံး rostral-caudal အဆင့်ဆင့်မှာခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာBalfour et al။ 2004); ventral tegmental ဧရိယာ (VTA; 1000 ×800μm) (သုံး rostral-caudal အဆင့်ဆင့်မှာခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာBalfour et al။ 2004) နှင့် VTA အမြီး (Perrotti et al။ 2005); prefrontal cortex (anterior cinglulate ဧရိယာ (ACA); prelimbic cortex (PL); infralimbic cortex (IL); 600 800μmတစ်ဦးချင်းစီ×); caudate putamen (က CP; 800 ×800μm); (; နှင့် preoptic နျူကလိယ (400 × 600 μm MPN) medialနောက်ဆက်တွဲကိန်းဂဏန်းများ 1-3) ။ နှစ်ဦးအားပုဒ်မမဟာမဲခေါင်ဒေသတွင်းနှုန်းကိုရေတွက်ပြီးလျှင်, အုပ်စုတစ်စုယုတ်၏တွက်ချက်မှုအဘို့အတိရိစ္ဆာန်နှုန်းပျမ်းမျှခဲ့ကြသည်။ ΔFosB-မှာ IR ဆဲလ်၏လိင်ရင်တော့မှားမယ်နှင့်အတွေ့အကြုံရှိအုပ်စုတစ်စုပျမ်းမျှ unpaired t-စမ်းသပ်မှုသုံးပြီးတစ်ခုချင်းစီကိုမဟာမဲခေါင်ဒေသတွင်းဘို့နှိုင်းယှဉ်ခဲ့ကြသည်။
ΔFosBနှင့်က c-Fos ၏ analysis
အားလုံးဘာသာရပ်များ (5000x ရည်ရွယ်ချက်များကို အသုံးပြု. ) အတွက်ပုံသေကင်မရာဆက်တင်များနှင့် Neurolucida software ကို (MicroBrightfield Inc မှ); ပုံများတစ် Leica ဏု (Wetzlar, ဂျာမနီ DM10B, Leica Microsystems ကို) မှပူးတွဲပါတစ်အအေး CCD ကင်မရာ (Microfire, Optronics) ကိုသုံးပြီးဖမ်းမိခဲ့သည်။ NAc core နဲ့ shell ကိုအတွက်ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာခြင်းစံဒေသများရှိက c-Fos-မှာ IR သို့မဟုတ်ΔFosB-မှာ IR ဖော်ပြဆဲလ်၏နံပါတ် (400 600μmတစ်ဦးချင်းစီ×; နောက်ဆက်တွဲပုံ 1) နှင့် mPFC ၏ ACA (600 ×800μm; နောက်ဆက်တွဲပုံ 3) ကိုယ်တိုင် (MBF Bioscience, Williston, VT) Neurolucida software ကိုသုံးပြီးတိရိစ္ဆာန်နှုန်း2ကဏ္ဍများအတွက်စမ်းသပ်အုပ်စုများမှမြင်နိုင်လေ့လာသူများကရေတွက်နှင့်တိရစ္ဆာန်နှုန်းပျမ်းမျှခဲ့ကြသည်။ 0.05 တစ်အရေးပါမှုအဆင့်မှာ post ကို hoc နှိုင်းယှဉ်မှုအတွက်နှင့် Fisher LSD: က c-Fos သို့မဟုတ်ΔFosBဆဲလ် Group မှပျမ်းမျှ Two-လမ်း ANOVA (လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအတွေ့အကြုံနှင့်လိင်လှုပ်ရှားမှုအချက်များ) ကို အသုံးပြု. နှိုင်းယှဉ်ခဲ့ကြသည်။
စမ်းသပ်မှု 2: ΔFosBစကားရပ်ခြယ်လှယ်
ဗိုင်းရပ်စ် Vector-mediated Gene လွှဲပြောင်း
လိင်နုံအထီး Sprague Dawley ကြွက်ကျပန်းကြိုတင် stereotaxic ခွဲစိတ်ဖို့အုပ်စုများသို့ခွဲခြားခဲ့ကြသည်။ (ထိန်းချုပ်မှု; ဎ = 12) အားလုံးတိရိစ္ဆာန်များ GFP ကုဒ်သွင်း vectors recombinant adeno-ဆက်စပ်ဗိုင်းရပ်စ် (rAAV) ၏နှစ်နိုင်ငံအပြန်အလှန် microinjections လက်ခံရရှိ, ရိုင်း-type အမျိုးအစားΔFosB (ဎ = 11) သို့မဟုတ်ΔFosBတစ်ဦးကြီးစိုးကအနုတ်စည်းနှောင်မိတ်ဖက်ΔJunD (ဎ = 9) ချေါ အဆိုပါ NAc သို့။ ΔJunD (မျိုးဗီဇမြှင့အတွင်းက AP-1 ဒေသ binding မတိုင်မီယှဉ်ပြိုင်ΔFosBနှင့်အတူ heterodimerizing အားဖြင့်ΔFosBကမကထပြုခဲ့ကူးယူလျော့ကျWinstanley et al။ 2007) ။ ဗိုင်းရပ်စ် titer qPCR နှင့်အကဲဖြတ်ဆုံးဖြတ်ခဲ့ပါတယ် Vivo အတွက် စတင်ခြင်းလေ့လာဖို့ကြိုတင်။ Titer 1-2 × 10 ခဲ့သည်11 mL နှုန်းကူးစက်မှုန်။ rAAV virus သယ်ဆောင် 1.5 မိနစ်ကျော်7μL / ဘက်တစ် volume ထဲမှာထိုးသွင်းခဲ့ကြ (ကိုသြဒီနိတ်: AP + 1.5, Bregma ထံမှ ML +/- 1.2; DV -7.6 ဦးခေါင်းခွံမျက်နှာပြင်ကနေ Paxinos နှင့် Watson, 1998 အရ) တစ်ဦး Hamilton ကပြွတ်ကို အသုံးပြု. (5μL ; ဟားဗတ်ယန္တရား, Holliston MA, ယူအက်စ်အေ) ။ အဆိုပါ virus သယ်ဆောင်ထိန်းချုပ်မှုတာဟာတစ်ဦးတည်း (ထက် သာ. ကြီးမြတ်ခြင်းမရှိအဆိပ်အတောက်ထုတ်လုပ်ရန်Winstanley et al, 2007; AAV ပြင်ဆင်မှု၏အသေးစိတျအဘို့အတွေ့ Hommel et al ။ , 2003) ။ အမူအကျင့်စမ်းသပ်ချက် (အကောင်းဆုံးနှင့်တည်ငြိမ်ဗိုင်းရပ်စ်ရောဂါကူးစက်ဘို့အခွင့်ပြုခြင်းအားနည်းချက်ကိုထိုးပြီးနောက်3ရက်သတ္တပတ်စတင်Wallace et al။ 2008) ။ 10 ရက်ပေါင်းမှာ murine မျိုးစိတ်ထိပ်မှာရှိတဲ့ Transgene တွင်စကားရပ်နှင့်အနည်းဆုံး6လကြာမြင့်မားသောဖြစ်နေဆဲ (Winstanley et al။ 2007) ။ အဆိုပါစမ်းသပ်မှုများအဆုံးမှာတိရစ္ဆာန် transcardially perfused ခဲ့ကြသည်နှင့်အ NAc ကဏ္ဍများ immuno-လုပ်ငန်းများ၌ GFP များအတွက်ခဲ့ကြသည် (1: 20K; ယုန် Anti-GFP antibody ကို; Molecular စုံစမ်းစစ်ဆေး) တစ်ဦး Credit: ABC-peroxidase-DAB တုံ့ပြန်မှုကို အသုံးပြု. (အထက်တွင်ဖော်ပြထားသကဲ့သို့) histologically မှ တစ်ဦးအမှတ်အသားအဖြစ် GFP အသုံးပြု. ဆေးထိုးက်ဘ်ဆိုက်များကိုအတည်ပြုရန် (နောက်ဆက်တွဲပုံ 4) ။ ΔFosBနှင့်ΔJunD virus သယ်ဆောင်လည်းအားလုံးတိရိစ္ဆာန်များအတွက် GFP visualization အားဖြင့်ဆေးထိုး site ကိုစိစစ်အတည်ပြုဘို့ခွင့်ပြုထားတဲ့ပြည်တွင်းရေးရိုင်ဗိုဇုမ်းများအား entry ကို site ကိုအားဖြင့်ကွဲကွာ GFP ဖော်ပြနေတဲ့အစိတ်အပိုင်းဆံ့။ အဆိုပါ NAc ဖို့ကန့်သတ်ဆေးထိုးက်ဘ်ဆိုက်များနှင့်ဗိုင်းရပ်စ်ပိုး၏ပြန့်ပွားနှင့်အတူသာလျှင်တိရိစ္ဆာန်များစာရင်းအင်းဆန်းစစ်ခြင်းများပြုလုပ်ထားခြင်းတွင်ထည့်သွင်းခဲ့ကြသည်။ ဗိုင်းရပ်စ်ပိုး၏ပြန့်ပွားယေဘုယျအား NAc တစ်ဦးသောအဘို့ကိုကန့်သတ်ထားခဲ့ပါတယ်နှင့်နျူကလိယတလျှောက်လုံး rostral-caudally ပျံ့နှံ့ခဲ့ပါဘူး။ ထိုမှတပါး, ဗိုင်းရပ်စ်ပျံ့နှံ့ shell ကိုသို့မဟုတ် core ကိုဖြစ်စေရန်အများအားဖြင့်ကန့်သတ်သည်ထင်ရှား။ , သို့သော် NAc အတွင်းဆေးထိုးက်ဘ်ဆိုက်များနှင့်ပြန့်ပွား၏မူကွဲအပြုအမူအပေါ်သက်ရောက်မှုကိုသြဇာလွှမ်းမိုးခြင်းမရှိပေ။ နောက်ဆုံးအနေနဲ့ GFP ထိုး (ယခင်လေ့လာမှုများအနေဖြင့် Non-ခွဲစိတ်တိရိစ္ဆာန်များမှနှိုင်းယှဉ်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူသို့မဟုတ်လိင်မှုဆိုင်ရာအပြုအမူများ၏အတွေ့အကြုံ-သွေးဆောင်ပံ့ပိုးမထိခိုက်ခဲ့ပါBalfour et al။ 2004).
ဗိုင်းရပ်စ်အားနည်းချက်ကိုပေးပို့အောက်ပါသုံးပတ်, အိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအတွေ့အကြုံကရဖို့ရန် 1 ဆက်တိုက်နေ့စဉ်မိတ်လိုက်အစည်းအဝေးများ (အတွေ့အကြုံကိုအစည်းအဝေးများ) အတွက်တဦးတည်းသုတ်ရည်လွှတ် (သို့မဟုတ်4နာရီများအတွက်) မှ mated နှင့်နောက်ပိုင်းတွင်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူများ၏အတွေ့အကြုံသွေးဆောင်ပံ့ပိုးကူညီ၏ရေရှည်စကားရပ်များအတွက်စမ်းသပ်ပြီးခဲ့ကြသည် 1 နောက်ဆုံးအတွေ့အကြုံကို session တစ်ခုအပြီးတွင်နှင့်2ရက်သတ္တပတ် (စမ်းသပ်အစည်းအဝေးများ 1 နှင့် 2) ။ အထက်တွင်ဖော်ပြထားသကဲ့သို့လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူ parameters တွေကိုအားလုံးမိတ်လိုက်အစည်းအဝေးများကာလအတွင်းမှတ်တမ်းတင်ထားသောခဲ့ကြသည်။ ကုသမှုသို့မဟုတ်မိတ်လိုက်: Factor; သို့မဟုတ်တလမ်း ANOVAs (သုတ်ရည်လွှတ်အောင်းနေချိန်, ဘယ်အရာမှမပါဘဲနှင့် intromissions အရေအတွက်: တစ်ဦးချင်းစီမိတ်လိုက် session တစ်ခုအတွင်းမှာအားလုံး parameters တွေကိုအဘို့အစာရင်းအင်းကွဲပြားမှုနှစ်ခု-လမ်းထပ်ခါတလဲလဲအစီအမံ ANOVAs (ကုသမှုနှင့်မိတ်လိုက် session တစ်ခုအချက်များ) ကို အသုံးပြု. အုပ်စုများအတွင်းနှင့်အကြားနှိုင်းယှဉ်ခဲ့ကြသည် session တစ်ခု) Fisher က LSD သို့မဟုတ် 0.05 တစ်အရေးပါမှုအဆင့်မှာ post ကို hoc နှိုင်းယှဉ်မှုအတွက် Newman က-Keuls စမ်းသပ်မှုအားဖြင့်နောက်သို့လိုက်ကြ၏။ အထူးသမိတ်လိုက် parameters တွေကိုအပေါ်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအတွေ့အကြုံသင်တန်းနည်းပြသက်ရောက်မှုအတွေ့အကြုံကို session တစ်ခု 1 (ရင်တော့မှားမယ်) နှင့်အတွေ့အကြုံကိုအစည်းအဝေးများ 2, 3, ဒါမှမဟုတ်4တစ်ခုချင်းစီအကြားအဖြစ်တစ်ဦးချင်းစီအတှေ့အကွုံ session တစ်ခုအတွင်းစမ်းသပ်အုပ်စုများအကြားနှိုင်းယှဉ်ခဲ့ကြသည်။ ထို့အပြင်, လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူ၏ရေရှည်ပံ့ပိုးကူညီခြင်းအပေါ်ကုသမှု (vector) ၏သက်ရောက်မှုခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာရန်, မိတ်လိုက် parameters တွေကိုတစ်ဦးချင်းစီကိုကုသအုပ်စုတစ်စုအတွင်းအတွေ့အကြုံကို session တစ်ခု4နှင့်စမ်းသပ် session တစ်ခု 1 နှင့်2အကြားနှိုင်းယှဉ်လျှင်များနှင့်တစ်ဦးချင်းစီကိုစမ်းသပ် session တစ်ခုအတွင်းစမ်းသပ်အုပ်စုများအကြားနှိုင်းယှဉ်ခဲ့ကြသည်။
အစပိုင်းမှာလိင်ရင်တော့မှားမယ်ထိန်းချုပ်မှုနှင့်နှိုင်းယှဉ်လျှင်လိင်ကြုံတွေ့ယောက်ျားအတွက်ဦးနှောက်တစ်လျှောက်လုံးΔFosBစုဆောင်းခြင်းတစ် Semi-အရေအတွက်စုံစမ်းစစ်ဆေးကောက်ယူခဲ့သည်။ ခြုံငုံတွေ့ရှိချက်များ၏တစ်ဦးကအကျဉ်းချုပ်ထဲမှာသည် စားပွဲတင် 1။ ΔFosB-မှာ IR ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာဆန်းစစ်၏စံဒေသများသုံးပြီးအများအပြား limbic-ဆက်နွယ်ဦးနှောက်ဒေသများတွင်ΔFosB-မှာ IR ဆဲလ်များ၏နံပါတ်များကိုအဆုံးအဖြတ်အားဖြင့်ပြုစုခဲ့သည်။ ပုံ 1 လိင်ရင်တော့မှားမယ်နှင့်အတွေ့အကြုံရှိတိရစ္ဆာန်များ၏ NAc staining DAB-နီ၏ကိုယ်စားလှယ်ပုံရိပ်တွေပေါ်ထွန်းရေးဖြစ်သည်။ သိသာထင်ရှားသောΔFosBတက်-စည်းမျဉ်း (mPFC ငျဒသေ၌တွေ့ပုံ 2A), NAc core နဲ့ shell ကို (2B), caudate putamen (2B) နှင့် VTA (2C) ။ NAc များတွင်သိသာထင်ရှားသောကွဲပြားခြားနားမှုအဆိုပါ NAc core နဲ့ shell ကိုအားလုံးကို rostral- caudal အဆင့်ဆင့်မှာရှိခဲ့နှင့်ဒေတာများအတွက်ပြသ ပုံ2အားလုံး rostro-caudal အဆင့်ဆင့်ကျော်ပျမ်းမျှဖြစ်ပါတယ်။ ဆနျ့ကငျြဘ၌, hypothalamic medial preoptic နျူကလိယ (:; ပျမ်းမျှ 1.8 +/- 0.26 ENS ပျမ်းမျှ 6.0 +/- 1.86 NNS) တွင်ΔFosB-မှာ IR မသိသိသာသာတိုးရှိ၏။
ရင်တော့မှားမယ်၏ NAc မလိင် (က) ΔFosB-မှာ IR ဆဲလ် (အနက်ရောင်) ဖေါ်ပြခြင်းကိုယ်စားလှယ်ပုံရိပ်တွေနှင့်မျှမလိင် (ခ) အုပျစုမြားခံစားရသည်။ aco: anterior commissure စကေးဘား 100 μmဖော်ပြသည်။
အတွက်ΔFosB-မှာ IR ဆဲလ်အရေအတွက်: အေ infralimbic (IL), prelimbic (PL) နှင့် anterior cingulate cortex (ACA) ကို medial prefrontal cortex ၏ငျဒသေ; ခနျူကလိယ core နဲ့ shell ကို accumbens နှင့် putamen (က CP) caudate; C. Rostral, အလယ်တန်း, caudal နှင့်အမြီး ...
လိင်အတွေ့အကြုံကိုမိတ်လိုက်-သွေးဆောင်က c-Fos attenuates
အဆိုပါ NAc အတွက်ΔFosBအဆင့်ဆင့်အပေါ်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအတွေ့အကြုံ၏အကျိုးသက်ရောက်မှုချောင်းအစွန်းအထင်းနည်းစနစ်ကို အသုံးပြု. အတည်ပြုခဲ့သည်ခဲ့ကြသည်။ ထို့အပြင်ခုနှစ်, က c-Fos ၏စကားရပ်အပေါ်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအတွေ့အကြုံ၏သက်ရောက်မှုဆန်းစစ်ခဲ့ကြသည်။ ပုံ3ΔFosB- (အစိမ်းရောင်) နှင့်က c-Fos (အနီ) ၏ကိုယ်စားလှယ်ပုံရိပ်တွေအားလုံးစမ်းသပ်အုပ်စုများအတွက် -IR ဆဲလ် (; B, NS, C, ENS; D:, ES တစ်ဦးက, NNS) ပေါ်ထွန်းရေးဖြစ်သည်။ NAc core ကိုအတွက်လိင်အတွေ့အကြုံကိုသိသိသာသာတိုးလာΔFosBစကားရပ် (ပုံ 4A: F ကို1,15 = 12.0; p = 0.003) နှင့် shell ကို (ပုံ 4C: F ကို1,15 = 9.3; p = 0.008) ။ ဆန့်ကျင်ဘက်အားဖြင့်, ကြိုတင် perfusion မှ 1 နာရီအဖော်ရှာ, ΔFosBစကားရပ်တခုတခုအပေါ်မှာအကျိုးသက်ရောက်မှုရှိသည်မဟုတ်ခဲ့ပါ (ပုံ 4A, C,) နှင့်ကြိုတင် perfusion မှချက်ချင်းလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအတွေ့အကြုံနှင့်မိတ်လိုက်အကြားမျှအပြန်အလှန်ရှာဖွေတွေ့ရှိခဲ့သည်။ မိတ်လိုက်၏ခြုံငုံအကျိုးသက်ရောက်မှုကို (NAc core ကိုနှစ်ဦးစလုံးအတွက်က c-Fos စကားရပ်အပေါ်ကြိုတင် perfusion မှရှိခဲ့သည်ပုံ 4B: F ကို1,15 = ၂၇.၄; p <27.4) နှင့် shell ကို (ပုံ 4D: F ကို1,15 = 39.4; p <0.001) ။ ထို့အပြင်၊ လိင်မှုဆိုင်ရာအတွေ့အကြုံများ၏အလုံးစုံအကျိုးသက်ရောက်မှုကို NAc ၏အဓိကနေရာတွင်တွေ့ရှိခဲ့သည် (ပုံ 4B: F ကို1,15 = 6.1; p = 0.026) နှင့် shell ကို (ပုံ 4D: F ကို1,15 = 1.7; p = 0.211) နှင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအတွေ့အကြုံနှင့်မိတ်လိုက်အကြားတစ်ဦးအပြန်အလှန်ကြိုတင် perfusion ဖို့ NAc core ကို (F ကိုတွေ့ရှိခဲ့သည်1,15 = 6.5; shell ကိုတစ်ဦးလမ်းကြောင်းသစ် (F ကိုအတူ p = 0.022),1,15 = 1.7; p = 0.211; F ကို1,15 = 3.4; p = 0.084) ။ Post ကို hoc (လိင်ရင်တော့မှားမယ်ယောက်ျား၏ core နဲ့ shell ကိုအတွက်သရုပ်ပြမိတ်လိုက်-သွေးဆောင်က c-Fos စကားရပ်ကိုပိုင်းခြားသုံးသပ်ပြီးပုံ 4B, D ကို) ။ သို့သျောလညျး, (လိင်ကြုံတွေ့ယောက်ျားအတွက်, က c-Fos သိသိသာသာမဟုတ်ခဲ့ NAc core ကိုတိုးမြှင်ပုံ 4B) နှင့်သိသိသာသာ shell ကိုအတွက် attenuated (ပုံ 4D) ။ ထို့ကြောင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအတွေ့အကြုံကမိတ်လိုက်-သွေးဆောင်က c-Fos စကားရပ်တစ်ခုလျှော့ချရေးစေ၏။ တိကျတဲ့ pair တစုံပညာရှိနှိုင်းယှဉ်ဘို့, P-တန်ဖိုးကိန်းဂဏန်းဒဏ္ဍာရီ၌ရှိကြ၏။
တစ်ခုချင်းစီကိုစမ်းသပ်အုပ်စုΔFosB (အစိမ်းရောင်) နှင့် NAc အတွက်က c-Fos (အနီ) ဖေါ်ပြခြင်းကိုယ်စားလှယ်ပုံရိပ်တွေ။ စကေးဘား 100 μmဖော်ပြသည်။
လိင်အတွေ့အကြုံကို-သွေးဆောင်ΔFosBနှင့်မိတ်လိုက်-သွေးဆောင်က c-Fos ။ သို့မဟုတ်က c-Fos ΔFosB (;; ရှဲလ်, C ကို ACA, E ကို Core, တစ်ဦးက) ၏နံပါတ်များကို (Core, B,; Shell ဆိုသည်မှာ: D; ACA, F) အုပ်စုတိုင်းအဘို့အ immunoreactive ဆဲလ်: NNS (ဎ = 5), NS (ဎ = 5), ENS (ဎ = 5) သို့မဟုတ် ES (ဎ = 4) ။ ဒေတာကိုထုတ်ဖော်ပြောဆိုနေကြပါတယ် ...
မိတ်လိုက်-သွေးဆောင်က c-Fos အဆင့်ဆင့်အပေါ်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအတွေ့အကြုံ၏အကျိုးသက်ရောက်မှုဟာ NAc ဖို့ကန့်သတ်မခံခဲ့ရပါဘူး။ က c-Fos စကားရပ်၏တစ်ဦးကအလားတူကို attenuation လိင်ရင်တော့မှားမယ်ထိန်းချုပ်မှုနှင့်နှိုင်းယှဉ်လျှင်လိင်အတွေ့အကြုံရှိတိရိစ္ဆာန်များအတွက် ACA အတွက်လေ့လာတွေ့ရှိခဲ့သည်။ လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအတှေ့အကွုံကို (ACA အတွက်ΔFosBစကားရပ်အပေါ်သိသိသာသာအကျိုးသက်ရောက်မှုရှိခဲ့ပုံ 4E: F ကို1,15 = 154.2; p <0.001) ။ perfusion မတိုင်မီမိတ်ΔFosBစကားရပ်အပေါ်အကျိုးသက်ရောက်မှုရှိသည်မဟုတ်ခဲ့ပေ (ပုံ 4C) ဒါပေမဲ့သိသိသာသာတိုးမြှင့်က c-Fos (ပုံ 4F: F ကို1,15 = 203.4; အဆိုပါ ACA အတွက် p <0.001) ။ ထို့အပြင် ACA တွင်မိတ်လိုက်ခြင်း - သွေးဆောင် c-Fos ဖော်ပြမှုသည်လိင်မှုအတွေ့အကြုံကြောင့်သိသိသာသာလျော့နည်းသွားသည်။ပုံ 4F: F ကို1,15 = 15.8; p = 0.001) ။ လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအတွေ့အကြုံနှင့်မိတ်လိုက်အကြားတစ်ဦးက Two-လမ်းအပြန်အလှန်ကြိုတင် perfusion မှ (ဂ-Fos စကားရပ်များအတွက်ရှာဖွေတွေ့ရှိခဲ့သည်ပုံ 4F: F ကို1,15 = 15.1; p <0.001) ။ တိကျတဲ့ pair တစုံ - ပညာရှိနှိုင်းယှဉ်များအတွက် P- တန်ဖိုးများပုံဒဏ္inာရီ၌ရှိကြ၏။ နောက်ဆုံးအနေဖြင့် medial preoptic nucleus တွင်မိတ်လိုက်ခြင်း - သွေးဆောင် c-Fos ဖော်ပြမှုကိုသိသိသာသာလျှော့ချခြင်းမရှိပါ (NS: Avg 63.5 +/- 4.0; ES: Avg 41.4 +/- 10.09) မိတ်လိုက် - သွေးဆောင်က c-Fos စကားရပ်အားလုံး ဦး နှောက်ဒေသများရှိထိခိုက်မခံခဲ့ရကြောင်းညွှန်ပြ ,FosB စကားရပ်အတွက်တိုး။
အဆိုပါ NAc အတွက်ΔFosBလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူအားဖြည့် mediates
လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူများ၏အတွေ့အကြုံ-သွေးဆောင်ပံ့ပိုးကူညီခြင်းဖြင့်သရုပ်ပြအဖြစ်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူအားဖြည့်များအတွက်အလားအလာမော်လီကျူးယန္တရားစူးစမ်းဖို့ဒေသခံΔFosBအဆင့်ဆင့်၏ခြယ်လှယ်နှင့်၎င်း၏မှတ်တမ်းလှုပ်ရှားမှု၏သက်ရောက်မှုဆုံးဖြတ်ပေးခဲ့သည်။ လေးခုဆက်တိုက်အတွေ့အကြုံကိုအစည်းအဝေးများကာလအတွင်းလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအတွေ့အကြုံကတောင်ပေါ်မှာအောင်းနေချိန်အပေါ်သိသိသာသာအကျိုးသက်ရောက်မှုရှိခဲ့ (ပုံ 5A: F ကို1,23 = 13.8; p = 0.001), intromission အောင်းနေချိန် (ပုံ 5B: F ကို1,23 = 18.1; p <0.001) နှင့်သုက်လွှတ်အောင်းနေချိန် (ပုံ 5C: GFP, F ကို11,45 = 3.8; p = 0.006) ။ GFP ထိန်းချုပ်မှုတိရိစ္ဆာန်များလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူများမျှော်လင့်ထားသည့်အတွေ့အကြုံကို-သွေးဆောင်ပံ့ပိုးကူညီပြသခြင်းနှင့်ပထမဦးဆုံး mount မှသိသိသာသာနိမ့် latency ပြသ, အတွေ့အကြုံ session တစ်ခု4ကာလအတွင်းပထမဦးဆုံး intromission နှင့်သုတ်ရည်လွှတ် (session တစ်ခု 1 တွေ့ကြုံခံစားဖို့နှိုင်းယှဉ်လျှင်ပုံ 5A-C မှာ; p-တန်ဖိုးများ) အတွက်ပုံဒဏ္ဍာရီကြည့်ပါ။ လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူ၏ဤအတွေ့အကြုံကို-သွေးဆောင်ပံ့ပိုးလည်း (တောင်ပေါ်မှာများနှင့် intromission latency များအတွက်ΔFosBအုပ်စုတွင်လေ့လာတွေ့ရှိပေမယ့်သုတ်ရည်လွှတ်အောင်းနေချိန်အတွင်းတွေ့ရှိသိသိသာသာခြားနားချက်မျှမရှိခဲ့ပုံ 5A-C မှာ) ။ ဆနျ့ကငျြ, ΔJunDတိရိစ္ဆာန်များတစ်တန့်ပံ့ပိုးကူညီပြသ, တောင်ပေါ်အဘို့အ latency, intromissions နှင့်သုက်ထပ်ခါတလဲလဲမိတ်လိုက်အစည်းအဝေးများနှင့်အတူကျဆင်းခြင်းလုပ်ခဲ့တယ်သော်လည်းအတွေ့အကြုံကိုအစည်းအဝေးများ 1 နှင့်4အကြားနှိုင်းယှဉ်တဲ့အခါမှာအဲဒီ parameters တွေကိုအဘယ်သူအားမျှ (စာရင်းအင်းအရေးပါမှုကိုရောက်ရှိပုံ 5A-C မှာ) ။ ΔJunD mount မှသိသိသာသာရှည် latency ခဲ့ကြောင်းဦးချင်းစီအတှေ့အကွုံ session တစ်ခုရှိုးအုပ်စုကိုနှိုင်းယှဉ်အကြား, intromit နှင့်ΔFosBနှင့် GFP (နှိုင်းယှဉ်အတွေ့အကြုံကိုအစည်းအဝေးများကာလအတွင်း ejaculateပုံ 5A-C မှာ) ။ ထို့အပြင်ခုနှစ်, လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအတွေ့အကြုံနှင့်ကုသမှုနှစ်ခုစလုံး (သုတ်ရည်ထိထိရောက်မှုအပေါ်သိသာထင်ရှားသောသက်ရောက်မှုရှိခဲ့ပုံ 5F: လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအတွေ့အကြုံ, F ကို1,12 = ၂၂.၅; p <22.5; ကုသမှု, F1,12 = 3.3; p = 0.049) ။ ΔFosBအထီး4session တစ်ခု 1 တွေ့ကြုံခံစားဖို့နှိုင်းယှဉ်လျှင်အတှေ့အကွုံ session တစ်ခု (စဉ်အတွင်းသုတ်ရည်ထိထိရောက်မှုတိုးပွားလာခဲ့သည်ပုံ 5F) ။ ထို့အပြင်ခုနှစ်, ΔFosBတိရိစ္ဆာန်များ (အတွေ့အကြုံကို session တစ်ခု4နှိုင်းယှဉ်, အတွေ့အကြုံ session တစ်ခုတစ်ရက် 1 စဉ်အတွင်းသုတ်ရည်လွှတ်ရှေ့သိသိသာသာနည်းပါးလာတောင်ပေါ်ခဲ့ပုံ 5D: F ကို10,43 = 4.1; p = 0.004), နှင့်ΔJunDအထီး (အရှင်သိသိသာသာအခြားအုပ်စုနှစ်စု၏ဖြစ်စေခြင်းထက်, သုတ်ရည်ထိထိရောက်မှုလျော့နည်းသွား, သုတ်ရည်လွှတ်ရှေ့ကိုသိသိသာသာကိုပိုပြီးတောင်ပေါ်ခဲ့ပုံ 5D နှင့် F) ။ ΔJunDတိရိစ္ဆာန်များမသော်လည်းထို့ကြောင့် GFP နှင့်ΔFosBတိရိစ္ဆာန်များ, လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူများနှင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာစွမ်းဆောင်ရည်စတင်များ၏အတွေ့အကြုံကို-သွေးဆောင်ပံ့ပိုးကူညီပြသ။
GFP (ဎ = 12), ΔFosB (ဎ = 11) နှင့်ΔJunD (ဎ = 9) တိရစ္ဆာန်များ၏လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူ: အောင်းနေချိန် (က), intromission အောင်းနေချိန် (ခ), သုတ်ရည်လွှတ်အောင်းနေချိန် (ဂ), တောင်ပေါ်အရေအတွက် (ဃ) mount intromissions အရေအတွက် (E) နှင့်သုတ်ရည်ထိထိရောက်မှု (F ကို) ။ ဒေတာကိုထုတ်ဖော်ပြောဆိုနေကြပါတယ် ...
ΔFosBစကားရပ်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူများ၏အတွေ့အကြုံ-သွေးဆောင်ပံ့ပိုးကူညီ၏ရေရှည်စကားရပ်များအတွက်အရေးပါသောအယူအဆစမ်းသပ်ဖို့နောက်ဆုံးအတှေ့အကွုံ session တစ်ခုအပြီး, အိမ်မွေးတိရစ္ဆာန် 1 ရက်သတ္တပတ်စမ်းသပ်ပြီးခဲ့ကြသည် (စမ်းသပ် session တစ်ခု 1) နှင့်2ရက်သတ္တပတ် (စမ်းသပ် session တစ်ခု 2) ။ အဆိုပါအမူအကျင့် parameters တွေကိုအဘယ်သူအားမျှ (GFP နှင့်ΔFosBအုပ်စုများအတွင်းစမ်းသပ်အစည်းအဝေးများ 1 သို့မဟုတ်2နှင့်နောက်ဆုံးအတှေ့အကွုံ session တစ်ခု4အကြားကွဲပြားအဖြစ်အမှန်စင်စစ်, လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူ facilitated နှစ်ဦးစလုံး GFP နှင့်ΔFosBအုပ်စုများအတွက်ထိန်းသိမ်းထားခဲ့သည်ပုံ 5A-C မှာ; ) ΔFosBတိရစ္ဆာန်များအဘို့စမ်းသပ် session တစ်ခု 1 အတွက်သုတ်ရည်လွှတ်အောင်းနေချိန်နှင့်သုတ်ရည်ထိထိရောက်မှု မှလွဲ. ။ ΔJunDတိရိစ္ဆာန်များနှင့် GFP သို့မဟုတ်ΔFosBအုပ်စုများအကြားသိသိသာသာကွဲပြားခြားနားမှု (အားလုံးလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူ parameters တွေကိုအဘို့နှစ်ခုလုံးကိုစမ်းသပ်အစည်းအဝေးများအတွက်ရှာဖွေတွေ့ရှိခဲ့ကြသည်ပုံ 5A-F ကို) ။ (အားလုံးအုပ်စုများအတွက်ယောက်ျားများ၏ 100% နောက်ဆုံးလေးမိတ်လိုက်အစည်းအဝေးများကာလအတွင်း ejaculated) ejaculated ကြောင့်တိရစ္ဆာန်များ၏ရာခိုင်နှုန်းရှိပါတယ် intromissions ၏နံပါတ်များကိုနှိုင်းယှဉ်တဲ့အခါမှာရှာဖွေတွေ့ရှိအုပ်စုများအကြားသို့မဟုတ်အတွင်းအဘယ်သူမျှမကွဲပြားမှု pei, ခဲ့ကြသည်, ဒါမှမဟုတ်။
လက်ရှိလေ့လာမှုလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအတွေ့အကြုံ NAc core နဲ့ခရုခွံ, mPFC, VTA နှင့် caudate putamen အပါအဝင်အများအပြား limbic-ဆက်နွယ်ဦးနှောက်ဒေသများအတွက်ΔFosBတစ်ခုစုဆောင်းခြင်းကိုဖြစ်ပေါ်စေသည်ကြောင်းသရုပ်ပြခဲ့သည်။ ထို့အပြင်ခုနှစ်, လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအတွေ့အကြုံ NAc နှင့် ACA အတွက်က c-Fos ၏မိတ်လိုက်-သွေးဆောင်စကားရပ် attenuated ။ နောက်ဆုံးတွင် NAc အတွက်ΔFosBလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအတွေ့အကြုံနှင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူများ၏အတွေ့အကြုံ-သွေးဆောင်ပံ့ပိုးများ၏ရေရှည်ထုတ်ဖော်ဝယ်ယူစဉ်ကမိတ်လိုက်၏ပံ့ပိုးကူညီဖြန်ဖြေအတွက်အရေးပါဖြစ်ပြခဲ့ပါတယ်. Over-စကားရပ်ΔFosB၌နေစဉ်အတွင်းအထူးသ, လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာလှုံ့ဆော်မှုများနှင့်စွမ်းဆောင်ရည်များΔFosB-mediated ကူးယူ attenuated အတွေ့အကြုံကို-သွေးဆောင်ပံ့ပိုးလျှော့ချ အဆိုပါ NAc လျော့နည်းအတွေ့အကြုံနှင့်အတူတိုးမြှင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာစွမ်းဆောင်ရည်ကို၏စည်းကမ်းချက်များ၌, လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူတစ်ခုတိုးမြှင်ပံ့ပိုးကူညီစေ၏။ အတူတူလက်ရှိတွေ့ရှိချက်ΔFosBရေရှည်အာရုံကြောများနှင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအတှေ့အကွုံအားဖြင့်သွေးဆောင်အပြုအမူ plasticity များအတွက်အရေးပါမော်လီကျူးဖျန်ဖြေသောအယူအဆထောက်ခံပါတယ်။
လက်ရှိတွေ့ရှိချက်အထီးကြွက်များတွင် NAc အတွက်လိင်အတွေ့အကြုံကို-သွေးဆောင်ΔFosBဖေါ်ပြခြင်းယခင်လေ့လာမှုများတိုးချဲ့ (Wallace et al။ 2008) နှင့်မိန်းမနှစ်ယောက်တည်းကိုဟမ်းစတား (ခွံ et al။ 2009). Wallace et al ။ (2008) ကြောင်း rAAV- ပြသအဆိုပါ NAc အတွက် Over-စကားရပ်ΔFosBပထမဦးဆုံးမိတ်လိုက် session တစ်ခုအတွင်းမှာလိင်ရင်တော့မှားမယ်တိရိစ္ဆာန်များအတွက်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူတိုးမြှင့်, (သုတ်ရည်လွှတ်မှနည်းပါးလာ intromissions နှင့်တိုတောင်း Post-ejaculatory ကြားကာလများကသက်သေ, ဒါပေမယ့်လိင်ကြုံတွေ့ယောက်ျားမရှိအကျိုးသက်ရောက်မှုရှိခဲ့အဖြစ်Wallace et al။ 2008).
ဆနျ့ကငျြ, လက်ရှိလေ့လာမှုကိုပထမဦးဆုံးစမ်းသပ်နေစဉ်အတွင်းလိင်ရင်တော့မှားမယ်ယောက်ျားအတွက် Over-စကားရပ်ΔFosBမရှိသက်ရောက်မှုသရုပ်ပြ, ဒါပေမယ့်မဟုတ်ဘဲစဉ်နှင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအတွေ့အကြုံဝယ်ယူအောက်ပါ။ Over-expressors ΔFosB GFP တိရိစ္ဆာန်များနှင့်နှိုင်းယှဉ်လျှင်ပိုမိုလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာစွမ်းဆောင်ရည် (တိုးလာသုတ်ရည်ထိထိရောက်မှု) သရုပ်ပြခဲ့သည်။
ထို့အပြင်လက်ရှိလေ့လာမှုတစ်ခုΔJunD-ဖော်ပြဗိုင်းရပ်စ်အားနည်းချက်ကိုသုံးပြီးΔFosB-mediated ကူးယူပိတ်ဆို့ခြင်းအားဖြင့်ΔFosB၏အခန်းကဏ္ဍကိုစုံစမ်း။ ΔFosBစကားရပ်အတွေ့အကြုံ-သွေးဆောင်တိုး၏ကာကွယ်တားဆီးရေးလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာလှုံ့ဆော်မှုများ၏အတွေ့အကြုံကို-သွေးဆောင်ပံ့ပိုးကူညီ (တောင်ပေါ်မှာများနှင့် intromission latency တိုးမြှင့) အဖြစ်ကောင်းစွာအဖြစ်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာစွမ်းဆောင်ရည် (တိုးလာသုတ်ရည်လွှတ်အောင်းနေချိန်နှင့်တောင်ပေါ်အရေအတွက်) နှင့် facilitated လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူများ၏နောက်ဆက်တွဲရေရှည်စကားရပ် inhibited ။
ထို့ကြောင့်ဤဒေတာလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူများ၏အတွေ့အကြုံ-သွေးဆောင်ပံ့ပိုးများ၏ဝယ်ယူအတွက်ΔFosBများအတွက်တာဝန်အခန်းကဏ္ဍညွှန်ပြရန်ပထမဦးဆုံးဖြစ်ကြသည်။ ထို့အပြင်ဤဒေတာΔFosBလည်းအတွေ့အကြုံကို-သွေးဆောင်သင်တန်းနည်းပြအပြုအမူများ၏ရေရှည်စကားရပ်များတွင်ပြင်းထန်စွာပါဝင်ပတ်သက်ကြောင်းပြသပါ။ ကျနော်တို့သင်တန်းနည်းပြအပြုအမူ၏ဤရေရှည်စကားရပ်ဤအရပ်မှ NAc အတွက်ΔFosBဆုလာဘ်မှတ်ဉာဏ်တစ်ဖျန်ဖြေသည်သဘာဝအလျောက်အကျိုးသည်မှတ်ဉာဏ်တစ်ပုံစံကိုကိုယ်စားပြုကြောင်းတင်ပြသည်။ လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအတှေ့အကွုံမြားကိုလညျး, အ VTA နှင့် mPFC အတွက်ဆုလာဘ်များနှင့်မှတ်ဉာဏ်နှင့်ပတ်သက်သည်ဟုယူဆရသည့်နေရာများတွင်ΔFosBအဆင့်ဆင့်တိုးမြှင့် (Balfour et al။ 2004; ဖိလစ် et al။ 2008). အနာဂတ်လေ့လာမှုများဆုလာဘ်မှတ်ဉာဏ်အတွက်ဤဒေသများရှိတက်-စည်းမျဉ်းΔFosBတစ်အလားအလာအရေးပါမှု elucidate ရန်လိုအပ်သည်။
ΔFosBစကားရပ် (ထိုသို့နာတာရှည်အထင်သည်တုန်လှုပ်မှုတည်းအောက်ပါဦးနှောက်မြဲအလိုက်သင့်ပြောင်းလဲနေထိုင်တစ်ဦးမော်လီကျူးဖျန်ဖြေအဖြစ်အကြီးအအလားအလာရှိပါတယ်, မြင့်မားတည်ငြိမ်Nestler et al။ 2001). ΔFosBတဖြည်းဖြည်းမျိုးစုံကင်းထိုးကျော် NAc တိုးပွါးနှင့်ရက်သတ္တပတ်အတော်ကြာမှတက်ဘို့ဆက်လက်ပြသထားသည် (မျှော်လင့်ချက် et al။ 1992; မျှော်လင့်ချက် et al။ 1994). NAc ΔFosBစကားရပ်တွင်ဤအပြောင်းအလဲများကိုမူးယစ်ဆေးဆုလာဘ်ထိခိုက်စေစွဲလမ်းနှင့်ဆက်စပ်လျက်ရှိသည် (Chao & Nestler ၂၀၀၄; McClung & Nestler 2003; McClung et al။ 2004; Nestler 2004, 2005, 2008; Nestler et al။ 2001; Zachary et al။ 2006) ။ ဆနျ့ကငျြ, သဘာဝဆုလာဘ်ဖြန်ဖြေအတွက်ΔFosB၏အခန်းကဏ္ဍကို understudied ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ မကြာသေးမီကအထောက်အထားများအ NAc အတွက်ΔFosBသော induction သဘာဝကဆုလာဘ်အတွက်ပါဝင်ပတ်သက်ကြောင်းအကြံပြုပေါ်ထွက်ခဲ့သည်။ ΔFosBအဆင့်ဆင့်အလားတူ sucrose စားသုံးမှုနှင့်ဘီးပြေးအောက်ပါ NAc အတွက်တိုးလာနေကြတယ်။ ကြွက်များတွင် bitransgenic ကြွက်သို့မဟုတ်ဗိုင်းရပ်စ် virus သယ်ဆောင်သုံးပြီး striatum အတွက် Over-စကားရပ်ΔFosB၏, sucrose စားသုံးမှုအတွက်တိုးဖြစ်ပေါ်စေသည် အစားအစာနှင့်တိုးမြှင့်အလိုအလျောက်ဘီးပြေးများအတွက်မြှင့်တင်ရန်လှုံ့ဆျောမှု (Olausson et al။ 2006; Wallace et al။ 2008; Werme et al။ 2002) ။ လက်ရှိဒေတာသိသိသာသာသည်ဤအစီရင်ခံစာများမှထည့်သွင်းခြင်းနှင့်နောက်ထပ်ΔFosBဆုလာဘ်အားဖြည့်နှင့်သဘာဆုလာဘ်မှတ်ဉာဏ်များအတွက်အရေးပါဖျန်ဖြေသောအယူအဆထောက်ခံပါတယ်။
ΔFosBအဆိုပါ mesolimbic စနစ် plasticity ၏ induction ကနေတဆင့်လိင်မှုဆိုင်ရာအပြုအမူများ၏အတွေ့အကြုံ-သွေးဆောင်အားဖြည့်ဖျန်ဖြေလိမ့်မည်။ အမှန်စင်စစ်, လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအတွေ့အကြုံ mesolimbic စနစ်ကြာရှည်ပြောင်းလဲမှုများကိုများစွာဖြစ်ပေါ်စေသည် (Bradley & Meisel 2001; Frohmader et al။ 2009; အိုး et al။ 2010) ။ တစ်ဦးကအဆိုပါအမူအကျင့်အဆင့် t ကို, စိတ်ကြွဆေးတစ် sensitized locomotor တုံ့ပြန်မှုများနှင့်တစ်ဦးပိုမိုစိတ်ကြွဆေးဆုလာဘ် (လိင်အတွေ့အကြုံရှိအထီးကြွက်များတွင်ပြသထားသည်အိုး et al။ 2010); စိတ်ကြွဆေးတစ်ခုပြောင်းလဲ locomotor တုံ့ပြန်မှုကိုလည်း (အမျိုးသမီးဟမ်းစတားနှင့်အတူလေ့လာတွေ့ရှိထားသည်Bradley & Meisel 2001) ။ ထို့အပွငျ dendritic Arbore ၏ dendritic ကျောရိုးနှင့်ရှုပ်ထွေးမှုအရေအတွက်တိုးအထီးကြွက် (အတွင်းလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအတွေ့အကြုံကနေတစ်ခု abstinence ကာလအောက်ပါတွေ့ပါပြီအိုး et al။ 2010). လက်ရှိလေ့လာမှုΔFosBလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအတွေ့အကြုံ၏ရေရှည်ရလဒ်များတစ်ဦးသတ်သတ်မှတ်မှတ်မော်လီကျူးဖျန်ဖြေဖြစ်နိုင်ပါသည်အကြံပြုထားသည်။ သဘောတူညီချက်မှာတော့ΔFosBမကြာသေးမီကနာတာရှည်ကင်းအုပ်ချုပ်ရေးတုံ့ပြန် dendritic ကျောရိုးအပြောင်းအလဲများကို inducing များအတွက်အရေးကြီးသောဖြစ်ပြထားပြီး (Dietz et al။ 2009; ဝင်္ကပါ et al။ 2010).
(ဒါဟာအထက် neurotransmitter (s) ကို NAc အတွက်ΔFosB inducing တာဝန်ရှိသည်ဖြစ်သောရှင်းရှင်းလင်းလင်းမသိရပါဘူး, ဒါပေမယ့် DA တစ်ကိုယ်စားလှယ်လောင်းအဖြစ်အဆိုပြုပြီးပါပြီNye et al။ 1995). လုံးဝနီးပါးကိုကင်း, စိတ်ကြွဆေး, opiates, cannabinoids နှင့်အီသနောအဖြစ်သဘာဝကဆုလာဘ်အပါအဝင်အလွဲသုံးစားမှုအားလုံးမူးယစ်ဆေးဝါးများသည်, NAc အတွက်ΔFosBတိုးမြှင့် (Perrotti et al။ 2005; Wallace et al။ 2008; Werme et al။ 2002). အလွဲသုံးစားမှုနှင့်သဘာဆုလာဘ်နှစ်ယောက်စလုံးမူးယစ်ဆေးဝါး NAc အတွက် Synaptic DA အာရုံစူးစိုက်မှုတိုးမြှင့် (Damsma et al။ 1992; ဟာနန်ဒက်ဇ်နှင့် Hoebel 1988a, b; Jenkins & Becker 2003). အလွဲသုံးစားမှုမူးယစ်ဆေးဝါးများအားဖြင့်ΔFosBသော induction ဆဲလ်တွေပါဝင်တဲ့ DA အဲဒီ receptor မှာပြခဲ့ပြီးကင်း-သွေးဆောင်ΔFosBတစ် D1 DA အဲဒီ receptor antagonis ပိတ်ဆို့နေသည်t ကို (Nye et al။ 1995). ထို့ကွောငျ့, DA လွှတ်ပေးရန်ΔFosBစကားရပ်ကိုလှုံ့ဆော်ခြင်းနှင့်အားဖြင့်ဆုလာဘ်-related neuroplasticity ပြေလည်အောင်ဆောင်ရွက်ပေးရန်တွေးဆနေပါတယ်. နောက်ထပ်ΔFosBအဆင့်ဆင့် DA-မှီခိုသောစိတ်ကူးထောက်ပံ့လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအတှေ့အကွုံΔFosBအဆင့်ဆင့်ပြောင်းလဲဘယ်မှာဦးနှောက်ဒေသများအတွက် medial prefrontal cortex နဲ့ basolateral amygdala အပါအဝင် VTA ကနေခိုင်မာတဲ့ dopaminergic input ကိုလက်ခံရရှိပြုပါသောတွေ့ရှိချက်ဖြစ်ပါတယ်.
သို့သော်ဆန့်ကျင်ဘက်အတွက်ΔFosB (ဆိုသော်ငြား hypothalamic ရင်းမြစ်များမှ, ဒီဧရိယာ dopaminergic input ကိုလက်ခံရရှိသော်လည်းအဆိုပါ medial preoptic ဧရိယာ၌တိုးပွားလာသည်မဟုတ်Miller က & Lonstein 2009) ။ မိတ်လိုက်-သွေးဆောင်ΔFosBစကားရပ်များနှင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာလှုံ့ဆော်မှုများနှင့်စွမ်းဆောင်ရည်အပေါ်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအတွေ့အကြုံ၏သက်ရောက်မှုများကို DA အရေးယူမှုအပေါ်မှီခိုနေကြပါလျှင်အနာဂတ်လေ့လာမှုများစမ်းသပ်ဖို့လိုအပ်နေပါသည်။ အထီးကြွက်များတွင်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာဆုလာဘ်အတွက် DA များအတွက်အခန်းကဏ္ဍ (လက်ရှိလုံးဝရှင်းရှင်းလင်းလင်းမသိရပါဘူးAgmo & Berenfeld 1990; Pfaus 2009) ။ DA အမျိုးသမီးသို့မဟုတ်မိတ်လိုက်ရန်ထိတွေ့စဉ်အတွင်း NAc အတွက်ဖြန့်ချိကြောင်းလုံလောက်သောသက်သေအထောက်အထားများ (ရှိပါသည်Damsma et al။ 1992) နှင့် DA အာရုံခံလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူစဉ်အတွင်း activated နေကြသည် (Balfour et al။ 2004) ။ သို့သော် DA အဲဒီ receptor ရန်စနစ်တကျထိုး (လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာဆုလာဘ်-သွေးဆောင် conditional ရာအရပျ preference ကိုတားဆီးမရAgmo & Berenfeld 1990) နှင့် DA မိတ်လိုက်၏အတွေ့အကြုံကို-သွေးဆောင်အားဖြည့်များအတွက်အရေးပါသောအယူအဆ untested ဖြစ်ပါတယ်။
ဒါဟာလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူအပေါ်ΔFosBသက်ရောက်မှု၏မြစ်အောက်ပိုင်းပြုပြီတွေဘာတွေရှိတယ်ဆိုတာကြောင့်လည်းမသိရသေးဖြစ်ပါတယ်။ ΔFosB (တစ်ဦးက AP-1 မှီခိုယန္တရားမှတဆင့်တစ်ဦးမှတ်တမ်း Active နှင့် repressor နှစ်ဦးစလုံးအဖြစ်ပြုမူပြသထားသည်McClung & Nestler 2003; Peakman et al။ 2003) ။ မြောက်မြားစွာပစ်မှတ်မျိုးဗီဇချက်ချင်းအစောပိုင်းဗီဇက c-fos (အပါအဝင်ဖော်ထုတ်ခဲ့ကြမျှော်လင့်ချက် et al။ 1992; မျှော်လင့်ချက် et al။ 1994; မော်ဂန် & Curran 1989; Renthal et al။ 2008; Zhang က et al။ 2006), cdk5 (Bibb et al။ 2001), dynorphin (Zachary et al။ 2006), sirtuin-1 (Renthal et al။ 2009), NFκB subunits (အန်း et al။ 2001), တစ်ဦးကြိမ်မြောက်အဆိုပါ AMPA အချိုမှု receptor GluR2 subunit (Kelz et al။ 1999) ။ လက်ရှိရလဒ်တွေကိုမိတ်လိုက်-သွေးဆောင်က c-Fos အဆင့်ဆင့်တိုးမြှင့်ΔFosB (NAc နှင့် ACA) နဲ့ဦးနှောက်ဧရိယာများတွင်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအတှေ့အကွုံလျှော့ချခဲ့သရုပ်ပြပါ။ ယခင်လေ့လာမှုများအတွက်က c-Fos အတွက်ထိုကဲ့သို့သောကျဆင်းခြင်းနောက်ဆုံးမိတ်လိုက် session ကိုအောက်ပါ 1 ရက်သတ္တပတ်စမ်းသပ်ပြီးအထီးကြွက်များတွင်တွေ့ရှိမခံခဲ့ရအဖြစ်က c-Fos များ၏ဖိနှိပ်မှု (နောက်ဆုံးမိတ်လိုက်နဲ့အကြိမ်ကြိမ်မိတ်လိုက်အစည်းအဝေးများကတည်းကကာလအပေါ်မှီခိုပေါ်လာသောBalfour et al။ 2004) သို့မဟုတ်သာတစ်ခုတည်းမိတ်လိုက် session ရဲ့ပါဝင်သည်ဟုလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအတှေ့အကွုံအပြီး (လိုပက်ဇ် & Ettenberg 2002) ။ ထို့အပြင်လက်ရှိတွေ့ရှိချက် (နာတာရှည်စိတ်ကြွဆေးထိတွေ့ပြီးနောက်ΔFosBဟာက c-fos ဗီဇ represses သောသက်သေအထောက်အထားများနှင့်အတူတသမတ်တည်းဖြစ်တယ်Renthal et al။ 2008) ။ ဤအတွေ့ရှိချက်နှင့်အညီ, အများအပြားချက်ချင်းအစောပိုင်းဗီဇ mRNAs (ဂ-fos, fosB, က c-jun, junB နှင့် zif268) ၏သော induction (စူးရှသောမူးယစ်ဆေးထိုးဖို့နှိုင်းယှဉ်လျှင်ထပ်ခါတလဲလဲကင်းထိုးအောက်ပါလျှော့ချခဲ့သည်မျှော်လင့်ချက် et al။ 1992; မျှော်လင့်ချက် et al။ 1994), နှင့်စိတ်ကြွဆေး-သွေးဆောင်က c-fos နာတာရှည်စိတ်ကြွဆေးအုပ်ချုပ်ရေး (ထံမှဆုတ်ခွာအောက်ပါနှိမ်နင်းခဲ့သည်Jaber et al။ 1995; Renthal et al။ 2008) ။ နာတာရှည်မူးယစ်ဆေးကုသမှုသို့မဟုတ်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအတှေ့အကွုံပြီးနောက်က c-Fos စကားရပ်များ၏ဆင်း-စည်းမျဉ်းများ၏ functional ဖြစ်စေဆီလျော်မှုမရှင်းလင်းဖြစ်နေဆဲနှင့်ထပ်ခါတလဲလဲဆုလာဘ်ထိတွေ့မှု (အနေနဲ့တိရိစ္ဆာန်ရဲ့ sensitivity ကိုထိန်းညှိဖို့အရေးပါသော homeostatic ယန္တရားဖြစ်အကြံပြုထားသည်Renthal et al။ 2008).
နိဂုံးချုပ်မှာတော့လက်ရှိလေ့လာမှု NAc အတွက်ΔFosBΔFosBယေဘုယျဆုလာဘ်အားဖြည့်ခြင်းနှင့်မှတ်ဉာဏ်များအတွက်အရေးကြီးသောကြောင်းဖြစ်နိုင်ခြေ supporting, လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာဆုလာဘ်မှတ်ဉာဏ်အတွက်အရေးပါသောအခန်းကဏ္ဍကြောင်းပြသ။ လက်ရှိလေ့လာမှုကနေတွေ့ရှိချက်နောက်ထပ်သဘာဝကဆုလာဘ်အတွက်ΔFosBများအတွက်အခန်းကဏ္ဍသရုပ်ပြ, လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာဆုလာဘ်များနှင့်လှုံ့ဆော်မှုဖျန်ဖြေတစ်ခုကိုဆယ်လူလာနှင့်မော်လီကျူးယန္တရားများကျွန်တော်တို့ရဲ့နားလည်မှု elucidate နှင့်ΔFosBစွဲ၏ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုအတွက်အရေးပါသောကစားသမားကြောင်းဖေါ်ပြခြင်းစာပေ၏ခန္ဓာကိုယ်မှ add အားဖြည့်။
Supp ပုံ S1-S4 & စားပွဲတင် S1-S2
ဒါဟာသုတေသန KKP နှင့် LMC မှ EJN မှစိတ်ကျန်းမာရေးအမျိုးသားအင်စတီကျု, LMC မှကနျြးမာရေးသုတေသနကနေဒါ Institutes ထံမှထောက်ပံ့ငွေကထောက်ခံနှင့်သဘာဝသိပ္ပံနှင့်ကနေဒါ၏အင်ဂျင်နီယာသုတေသနကောင်စီခဲ့သည်။
Agmo အေအမျိုးသားလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူကြွက်။ ဦးနှောက် Res ဦးနှောက် Res Protoc ။ 1997;1: 203-209 ။ [PubMed]
Agmo တစ်ဦးကယင်းအထီးကြွက်များတွင်သုတ်ရည်လွှတ်၏ဂုဏ်သတ္တိများအားဖြည့် Berenfeld R. : opioids နှင့် dopamine ၏အခန်းကဏ္ဍ။ ပြုမူနေ neuroscience ။ 1990;104: 177-182 ။ [PubMed]
အန်းအီး, Chen က J ကို, Zagouras P ကို, မဂ္ဂနာ H ကို, ဟော်လန် J ကို, Schaeffer အီး, Nestler EJ ။ နာတာရှည်ကင်းအုပ်ချုပ်မှုအားဖြင့်နျူကလိယ accumbens နျူကလီးယားအချက်-kappaB ၏ induction ။ J ကို Neurochem ။ 2001;79: 221-224 ။ [PubMed]
ME Balfour, ယု L ကို, Coolen LM ။ လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူနှင့်လိင်-ဆက်စပ်သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်တွေကိုအထီးကြွက်များတွင် mesolimbic system ကိုသက်ဝင်စေ။ Neuropsychopharmacology ။ 2004;29: 718-730 ။ [PubMed]
Bibb ဂျာ Chen က J ကို, တေလာ JR, Svenningsson P ကို, Nishi တစ်ဦးက, Snyder GL, ယန် Z ကို, Sagawa ZK, Ouimet CC ကို, Nairn AC အ, Nestler EJ, Greengard P. အကျိုးသက်ရောက်မှုကိုကင်းမှနာတာရှည်ထိတွေ့မှု၏အာရုံခံပရိုတိန်း Cdk5 နေဖြင့်စည်းမျဉ်းသတ်မှတ်နေကြသည်။ သဘာဝ။ 2001;410: 376-380 ။ [PubMed]
Bradley KC, Haas AR, Meisel RL ။ အမျိုးသမီးဟမ်းစတားအတွက် 6-Hydroxydopamine ကိုတွေ့ရှိရပါသည် (Mesocricetus auratus) အမျိုးသားများနှင့်အတူ copulatory interaction ကအပေါ်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအတှေ့အကွုံမြား၏ sensitized သက်ရောက်မှုများကိုဖျက်ပယ်။ ပြုမူနေ neuroscience ။ 2005;119: 224-232 ။ [PubMed]
Bradley KC, Meisel RL ။ နျူကလီးယပ် accumbens နှင့်စိတ်ကြွဆေး-နှိုးဆွ locomotor လှုပ်ရှားမှုအတွင်းက c-Fos ၏လိင်အမူအကျင့်သော induction အမျိုးသမီးဆီးရီးယားဟမ်းစတားအတွက်ယခင်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအတှေ့အကွုံအားဖြင့် sensitized နေကြသည်။ J ကို neuroscience ။ 2001;21: 2123-2130 ။ [PubMed]
Carl TL, Ohnishi yn, Ohnishi YH, Alibhai IN, Wilkinson ကို MB, Kumar ကတစ်ဦး, Nestler EJ ။ FosB တည်မငြိမ်ဖြစ်စေဘို့ Proteasome-မှီခိုနှင့် -independent ယန္တရားများ: DeltaFosB တည်ငြိမ်ရေးတို့အတွက် FosB degron domains များနှင့်ဂယက်ရိုက်၏မှတ်ပုံတင်။ EUR J ကို neuroscience ။ 2007;25: 3009-3019 ။ [PubMed]
Chao J ကို, Nestler EJ ။ မူးယစ်ဆေးစွဲ၏မော်လီကျူး neurobiology ။ Annu ဗြာ Med ။ 2004;55: 113-132 ။ [PubMed]
Chen က J ကို, Nye သူ, Kelz ကို MB, Hiroi N ကို, Nakabeppu Y ကို, မျှော်လင့်ခြင်း BT, Nestler EJ ။ electroconvulsive ဖမ်းဆီးရမိခြင်းနှင့်ကင်းကုသနေဖြင့်မြစ်ဝကျွန်းပေါ် FosB နှင့် FosB တူသောပရိုတိန်း၏စည်းမျဉ်း။ မော်လီကျူးဆေးဝါးဗေဒ။ 1995;48: 880-889 ။ [PubMed]
Colby CR, Whisler K ကို Steffen ကို C, Nestler EJ, ကိုယ်ပိုင် DW ။ DeltaFosB ၏ Striatal ဆဲလ်အမျိုးအစား-တိကျတဲ့ overexpression ကင်းဘို့မက်လုံးပေးပိုကောင်းစေပါတယ်။ J ကို neuroscience ။ 2003;23: 2488-2493 ။ [PubMed]
Coolen LM, Allard J ကို, Truitt WA, Mckenna Ke ။ သုတ်ရည်လွှတ်ဗဟိုစည်းမျဉ်း။ Physiol ပြုမူနေ။ 2004;83: 203-215 ။ [PubMed]
Damsma, G, Pfaus JG, Wenkstern: D, Phillips က AG က, Fibiger HC ။ လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူအထီးကြွက်၏နျူကလိယ accumbens နှင့် striatum အတွက် dopamine ဂီယာတိုးပွါး: အသစ်အဆန်းများနှင့်ရွေ့လျားနှင့်နှိုင်းယှဉ်လျှင်။ ပြုမူနေ neuroscience ။ 1992;106: 181-191 ။ [PubMed]
Dietz DM, ဝင်္ငါစက်ပြင် M က, Vialou V ကို, Dietz KC, Iniguez SD, Laplant မေး, Russo SJ, ဖာဂူဆန်: D, Nestler EJ ။ နျူကလိယ၏ dendritic ကျောရိုး၏ကင်းစည်းမျဉ်းထဲမှာΔFosBများအတွက်မရှိမဖြစ်အခန်းကဏ္ဍအာရုံခံ accumbens ။ အာရုံကြောသိပ္ပံ Abstract များအတွက် Society က။ 2009
Frohmader KS, အိုး KK, Balfour ME, Coolen LM ။ အပျော်အပါးရောစပ်: လူသားများနှင့်တိရိစ္ဆာန်မော်ဒယ်များအတွက်လိင်အပြုအမူအပေါ်မူးယစ်ဆေးဝါးများ၏သက်ရောက်မှုများကိုပြန်လည်ဆန်းစစ်ခြင်း။ Horm ပြုမူနေ။ 2009 စာနယ်ဇင်း၌တည်၏။
ခွံရှိ VL, Chakravarty S က, Nestler EJ, Meisel RL ။ နျူကလီးယပ် accumbens အတွက်မြစ်ဝကျွန်းပေါ် FosB overexpression အမျိုးသမီးဆီးရီးယားဟမ်းစတားအတွက်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာဆုလာဘ်ပိုကောင်းစေပါတယ်။ မျိုးဗီဇဦးနှောက်ပြုမူနေ။ 2009;8: 442-449 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
ဟာနန်ဒက်ဇ် L ကို, Hoebel BG ။ နို့တိုက်ကျွေးခြင်းနှင့် hypothalamic ဆွဟာ accumbens အတွက် dopamine လည်ပတ်ငွေကြေးကြောင့်တိုးမြှင့်။ Physiol ပြုမူနေ။ 1988a;44: 599-606 ။ [PubMed]
ဟာနန်ဒက်ဇ် L ကို, Hoebel BG ။ microdialysis ဖြင့်တိုင်းတာအဖြစ်စားနပ်ရိက္ခာဆုလာဘ်များနှင့်ကင်းသည့်နျူကလိယ accumbens အတွက် extracellular dopamine တိုးမြှင့်။ ဘဝကသိပ္ပံ။ 1988b;42: 1705-1712 ။ [PubMed]
Hiroi N ကို, Marek GJ, Brown က JR, သငျတို့သ H ကို, Saudou က F, Vaidya VA သို့, Duman RS, Greenberg ME, Nestler EJ ။ နာတာရှည် electroconvulsive သိမ်းယူမှု၏, မော်လီကျူးဆယ်လူလာများနှင့်အမူအကျင့်လုပ်ရပ်များအတွက် fosB ဗီဇ၏မရှိမဖြစ်အခန်းကဏ္ဍ။ J ကို neuroscience ။ 1998;18: 6952-6962 ။ [PubMed]
Hommel JD, Sears RM, Georgescu: D, Simmons DL, DiLeone RJ ။ ဗိုင်းရပ်စ်-mediated RNA ်ရောက်စွက်ဖက်ကိုအသုံးပြုပြီးဦးနှောက်အတွက်ဒေသခံဗီဇ knockdown ။ နတ် Med ။ 2003;9: 1539-1544 ။ [PubMed]
B က, Kosofsky B, Hyman SE, Nestler EJ မျှော်လင့်ပါတယ်။ ချက်ချင်းအစောပိုင်းဗီဇစကားရပ်နှင့်နာတာရှည်ကင်းအားဖြင့်ကြွက်နျူကလိယ accumbens အတွက် binding က AP-1 ၏စည်းမျဉ်း။ proc Natl Acad သိပ္ပံအမေရိကန်အေ 1992;89: 5764-5768 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
BT, Nye သူ, Kelz ကို MB, ကိုယ်ပိုင် DW, Iadarola MJ, Nakabeppu Y ကို, Duman RS, Nestler EJ မျှော်လင့်ပါတယ်။ နာတာရှည်ကိုကင်းနှင့်အခြားနာတာရှည်ကုသမှုအားဖြင့်ဦးနှောက်ထဲမှာပြောင်းလဲ Fos တူသောပရိုတိန်း၏ရေးစပ်ရှည်-တည်မြဲ AP-1 ရှုပ်ထွေးသော၏ induction ။ အာရုံခံဆဲလျ။ 1994;13: 1235-1244 ။ [PubMed]
Hull က EM, Meisel RL, Sachs bd ။ အထီးလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူ။ Horm ပြုမူနေ။ 2002;1: 1-139 ။
Jaber M က, Cador M က, Dumartin B, Normand အီး, Stinus L ကို, Bloch ခထူးခြားသောနှင့်နာတာရှည်စိတ်ကြွဆေးကုသကွဲပြားခြားနားကြွက် striatal အာရုံခံအတွက် neuropeptide messenger ကိုအာအန်အေအဆင့်ဆင့်နှင့် Fos immunoreactivity ထိန်းညှိ။ neuroscience ။ 1995;65: 1041-1050 ။ [PubMed]
Jenkins WJ, Becker က JB ။ အမျိုးသမီးကြွက်များတွင်အရှိန်အဟုန်သုတ်ရည်ထိကာလအတွင်း dopamine အတွက် dynamic တိုး။ EUR J ကို neuroscience ။ 2003;18: 1997-2001 ။ [PubMed]
Kelz ကို MB, Chen က J ကို, Carlezon WA, Jr က Whisler K ကို Gilden L ကို, Beckmann လေး, Steffen ကို C, Zhang က YJ, Marotti L ကို, ကိုယ်ပိုင် DW, Tkatch T က, Baranauskas, G, Surmeier DJ သမား, Neve RL, Duman RS, Picciotto MR, Nestler EJ ။ ဦးနှောက်ထဲမှာကူးယူအချက် deltaFosB ၏ expression ကိုကင်းမှ sensitivity ကိုထိန်းချုပ်သည်။ သဘာဝ။ 1999;401: 272-276 ။ [PubMed]
လိုပက်ဇ်နာရီ, အမျိုးသမီးကြွက်မှ Ettenberg အေ Exposure လိင်-နုံများနှင့်အတွေ့အကြုံရှိအထီးကြွက်အကြားက c-fos သော induction အတွက်ကွဲပြားခြားနားမှုထုတ်လုပ်သည်။ ဦးနှောက် Res ။ 2002;947: 57-66 ။ [PubMed]
ဝင်္ငါ Covington သူ, 3rd, Dietz DM, LaPlant မေး, Renthal W က, Russo SJ, စက်ပြင် M က, Mouzon အီး, Neve RL, Haggarty SJ, Ren Y ကို, Sampath SC, Hurd YL, Greengard P ကို, Tarakhovsky တစ်ဦးက, Schaefer တစ်ဦးက, Nestler EJ ။ ကိုကင်း-သွေးဆောင် plasticity အတွက် histone methyltransferase G9a ၏မရှိမဖြစ်အခန်းကဏ္ဍ။ သိပ္ပံ။ 2010;327: 213-216 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
McClung, CA, Nestler EJ ။ CREB နှင့် DeltaFosB အားဖြင့်မျိုးရိုးဗီဇစကားရပ်များနှင့်ကင်းဆုလာဘ်၏စည်းမျဉ်း။ နတ် neuroscience ။ 2003;6: 1208-1215 ။ [PubMed]
McClung, CA, Ulery PG, Perrotti LI, Zachary V ကို, Berton အို Nestler EJ ။ DeltaFosB: ဦးနှောက်အတွက်ရေရှည်လိုက်လျောညီထွေများအတွက်မော်လီကျူး switch သည်။ ဦးနှောက် Res Mol ဦးနှောက် Res ။ 2004;132: 146-154 ။ [PubMed]
Miller က SM, Lonstein JS ။ ကိုရွှေ့ဆိုင်ကြွက်များ၏ medial preoptic ဧရိယာမှ Dopaminergic စီမံကိန်းများ။ neuroscience ။ 2009;159: 1384-1396 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
မော်ဂန် JI, အာရုံခံအတွက် Curran တီ stimulus-ကူးယူနားချင်းဆက်မှီ: ဆယ်လူလာချက်ချင်း-အစောပိုင်းမျိုးဗီဇ၏အခန်းကဏ္ဍ။ ခေတ်ရေစီးကြောင်း neuroscience ။ 1989;12: 459-462 ။ [PubMed]
Nestler EJ ။ မူးယစ်ဆေးစွဲ၏မော်လီကျူးယန္တရားများ။ Neuropharmacology ။ 2004;47 ပျော့ပျောင်း 1: 24-32 ။ [PubMed]
Nestler EJ ။ ကိုကင်းစွဲ၏ neurobiology ။ သိပ္ပံ Pract ရှုထောင့်။ 2005;3: 4-10 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
Nestler EJ ။ ပြန်လည်ဆန်းစစ်ခြင်း။ စွဲလမ်း၏မှတ်တမ်းယန္တရားများ: DeltaFosB ၏အခန်းကဏ္ဍ။ ဖီလိုဖြတ်ကျော် R ကို Soc Lond B ကို Biol သိပ္ပံ။ 2008;363: 3245-3255 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
Nestler EJ, Barrot M က, ကိုယ်ပိုင် DW ။ DeltaFosB: စွဲတစ်ခုစဉ်ဆက်မပြတ်မော်လီကျူး switch သည်။ proc Natl Acad သိပ္ပံအမေရိကန်အေ 2001;98: 11042-11046 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
Nye သူ, မျှော်လင့်ခြင်း BT, Kelz ကို MB, Iadarola M က, Nestler EJ ။ အဆိုပါ striatum နှင့်နျူကလိယ accumbens အတွက်ကင်းသဖြင့်နာတာရှည် FOS-related ကိုပဲ induction ၏စည်းမျဉ်းများ Pharmacological လေ့လာမှုများ။ J ကို Pharmacol Exp Ther ။ 1995;275: 1671-1680 ။ [PubMed]
Olausson P ကို, Jentsch JD, Tronson N ကို, Neve RL, Nestler EJ, တေလာ JR ။ နျူကလီးယပ် accumbens အတွက် DeltaFosB အစားအစာ-အားဖြည့်ဆာပအပြုအမူများနှင့်လှုံ့ဆျောမှုထိန်းညှိ။ J ကို neuroscience ။ 2006;26: 9196-9204 ။ [PubMed]
Peakman MC, Colby ကို C, Perrotti LI, Tekumalla P ကို, Carl T က, Ulery P ကို, Chao J ကို, Duman ကို C, Steffen ကို C, Monteggia L ကို, Allen က MR, စတော့အိတ် JL, Duman RS, McNeish JD, Barrot M က, ကိုယ်ပိုင် DW, Nestler EJ , Schaeffer အီးသွေးဆောင်, Transgene ကြွက်တွေမှာက c-ဇွန်၏အလွှမ်းမိုးအနုတ်လက္ခဏာ Mutant ၏ဦးနှောက်ဒေသ-တိကျတဲ့စကားရပ်ကိုကင်းမှ sensitivity ကိုလျော့နည်းစေပါသည်။ ဦးနှောက် Res ။ 2003;970: 73-86 ။ [PubMed]
Perrotti LI, Bolanos, CA, Choi KH, Russo SJ, Edwards က S နဲ့, Ulery PG, Wallace DL, ကိုယ်ပိုင် DW, Nestler EJ, Barrot အမ် DeltaFosB psychostimulant ကုသမှုပြီးနောက် ventral tegmental ဧရိယာ၏ posterior အမြီးအတွက် GABAergic ဆဲလ်လူဦးရေအတွက်စုဆောင်း။ EUR J ကို neuroscience ။ 2005;21: 2817-2824 ။ [PubMed]
Perrotti LI, Hadeishi Y ကို, Ulery PG, Barrot M က, Monteggia L ကို, Duman RS, Nestler EJ ။ နာတာရှည်စိတ်ဖိစီးမှုပြီးနောက်ဆုလာဘ်-related ဦးနှောက်ဖွဲ့စည်းပုံထဲမှာ deltaFosB ၏ induction ။ J ကို neuroscience ။ 2004;24: 10594-10602 ။ [PubMed]
Perrotti LI, Weaver RR, Robison B, Renthal W က, ဝင်္ငါ Yazdani S က, Elmore RG, Knapp DJ သမား, Selley DE, မာတင် BR, Sim-Selley L ကို, Bachtell RK, ကိုယ်ပိုင် DW, Nestler EJ ။ အလွဲသုံးစားမှုမူးယစ်ဆေးဝါးများအားဖြင့်ဦးနှောက်ထဲမှာ DeltaFosB သော induction ၏ကွဲပြားပုံစံများ။ synapses ။ 2008;62: 358-369 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
Pfaus JG ။ လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအလိုဆန္ဒ၏လမ်းကြောင်း။ J ကိုလိင် Med ။ 2009;6: 1506-1533 ။ [PubMed]
Pfaus JG, Kippin TE, Centeno အက်စ်အခြေအနေနှင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူ: တစ်ပြန်လည်သုံးသပ်။ Horm ပြုမူနေ။ 2001;40: 291-321 ။ [PubMed]
Phillips က AG က, Vacca, G, Ahn အက်စ် dopamine, လှုံ့ဆျောမှုနှင့်မှတ်ဉာဏ်အပေါ်တစ်ဦးကထိပ်တန်း-Down ရှုထောင့်။ Pharmacol ထဲကဓာတုပစ်စညျးပြုမူနေ။ 2008;90: 236-249 ။ [PubMed]
အိုး KK, Balfour ME, Lehman MN, Richtand မိုင်, ယု L ကို, Coolen LM ။ သဘာဝကဆုလာဘ်များနှင့်နောက်ဆက်တွဲဆုလာဘ် abstinence အားဖြင့်သွေးဆောင်အဆိုပါ mesolimbic စနစ် Neuroplasticity ။ Biol စိတ်ရောဂါကုသမှု။ 2010;67: 872-879 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
Renthal W က, Carl TL, ဝင်္ငါ Covington သူ, 3rd, Truong HT, Alibhai ငါ Kumar ကတစ်ဦး, Montgomery RL, Olson မာခ်, Nestler EJ ။ မြစ်ဝကျွန်းပေါ် FosB နာတာရှည်စိတ်ကြွဆေးထိတွေ့ပြီးနောက်က c-fos ဗီဇ၏ဗီဇလုပ်ငန်းထိန်းချုပ်မှု desensitization mediates ။ J ကို neuroscience ။ 2008;28: 7344-7349 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
Renthal W က, Kumar ကတစ်ဦး, Xiao, G, Wilkinson က M, Covington သူ, 3rd, ဝင်္ငါ Sikder: D, Robison AJ, LaPlant မေး, Dietz DM, Russo SJ, Vialou V ကို, Chakravarty S က, Kodadek တီဂျေ, Stack တစ်ဦးက, Kabbaj M က, Nestler EJ ။ ကိုကင်းများက chromatin စည်းမျဉ်းများ၏မျိုးရိုးဗီဇ-ကျယ်ပြန့်ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာ sirtuins များအတွက်အခန်းကဏ္ဍဖော်ပြသည်။ အာရုံခံဆဲလျ။ 2009;62: 335-348 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
Tenk CM, Wilson က H ကို, Zhang ကမေး, အိုး KK, Coolen LM ။ အထီးကြွက်များတွင်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာဆုလာဘ်: သုတ်ရည်လွှတ်ခြင်းနှင့် intromissions နှင့်ဆက်နွယ်သောအခြေအနေများအရပျကိုဦးစားပေးအပေါ်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအတွေ့အကြုံ၏ဆိုးကျိုးများ။ Horm ပြုမူနေ။ 2009;55: 93-97 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
Ulery-Reynolds က PG, Castillo MA, Vialou V ကို, Russo SJ, Nestler EJ ။ DeltaFosB ၏ Phosphorylation Vivo အတွက်၎င်း၏တည်ငြိမ်မှု mediates ။ neuroscience ။ 2008
Ulery PG, Rudenko, G, Nestler EJ ။ phosphorylation အားဖြင့် DeltaFosB တည်ငြိမ်မှု၏စည်းမျဉ်း။ J ကို neuroscience ။ 2006;26: 5131-5142 ။ [PubMed]
Wallace DL, Vialou V ကို, Rios L ကို, Carl-Florence TL, Chakravarty S က, Kumar ကတစ်ဦး, ဂရေဟမ် DL, အစိမ်းရောင်က TA, Kirk ကတစ်ဦး, Iniguez SD, Perrotti LI, Barrot M က, DiLeone RJ, Nestler EJ, Bolanos-Guzman CA. နျူကလီးယပ်အတွက် DeltaFosB ၏သြဇာလွှမ်းမိုးမှုကသဘာဝဆုလာဘ်-related အပြုအမူအပေါ် accumbens ။ J ကို neuroscience ။ 2008;28: 10272-10277 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
Werme M က, Messer ကို C, Olson L ကို, Gilden L ကို, Thoren P ကို, Nestler EJ, Brene အက်စ်မြစ်ဝကျွန်းပေါ် FosB ဘီးပြေးထိန်းညှိ။ J ကို neuroscience ။ 2002;22: 8133-8138 ။ [PubMed]
Winstanley, CA, LaPlant မေး, Theobald DE, အစိမ်းရောင်က TA, Bachtell RK, Perrotti LI, DiLeone RJ, Russo SJ, Garth WJ, ကိုယ်ပိုင် DW, Nestler EJ ။ orbitofrontal cortex အတွက် DeltaFosB သော induction ကင်း-သွေးဆောင်သိမြင်မှုကမောက်ကမဖြစ်မှုမှသည်းခံစိတ် mediates ။ J ကို neuroscience ။ 2007;27: 10497-10507 ။ [PubMed]
Zachary V ကို, Bolanos, CA, Selley DE, Theobald: D, Cassidy အမတ်, Kelz ကို MB, Shaw-Lutchman T က, Berton အို Sim-Selley LJ, Dileone RJ, Kumar ကတစ်ဦး, Nestler EJ ။ မော်ဖင်းအကိုက်အရေးယူအတွက်နျူကလိယ accumbens အတွက် DeltaFosB များအတွက်မရှိမဖြစ်အခန်းကဏ္ဍ။ နတ် neuroscience ။ 2006;9: 205-211 ။ [PubMed]
Zhang က J ကို, Zhang က L ကို, ကွန်ဖူး H ကို, Zhang ကမေး, Zhang က D:, အဘိဓါန် Lou: D, Katz JL, Xu အမ်က c-Fos ကင်း-သွေးဆောင်မြဲပြောင်းလဲမှုများဝယ်ယူခြင်းနှင့်မျိုးသုဉ်းနိုင်အောင်စီစဉ်ပေးထားတယ်။ J ကို neuroscience ။ 2006;26: 13287-13296 ။ [PubMed]
အင်တာနက်ညစ်ညမ်းသည်အခမဲ့ဖြစ်သည်၊ သို့သော်ကလေးများသည်စျေးနှုန်းပေးကြသည်။ ကလေးတွေ online ညစ်ညမ်းတာကိုရပ်တန့်ဖို့ငါတို့ပိုလုပ်ရမယ်။ … t.co/qH2cqtx0HZ